Sifanele Move On? — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Sifanele Move On?
Ndikhe akungqinelani kunye Trayvon Martin lengxokolo ukususela ekuqaleni. Njengoninzi kuni ndabukela usasazo iindaba, ufunde amanqaku, wathetha ngawo nabahlobo. Ukuba alawule incoko karhulumente bamqumbisa ingxoxo eninzi ezifunekayo ngohlanga eMelika. Inyaniso ezimbi ngokobuhlanga Undityhale phambi kobuso bethu, kwanabo abaluthandayo ngathi ayisekho kwanyanzeleka ukuba ukuthetha ngayo.
Sekuphele unyaka emva, ngumbulali Trayvon iye wazama waza wafunyanwa engenatyala. Ngaba oko kuthetha ukuba kufuneka ayeke kwimiba? Bamfumana engenatyala, ngoko ke aba "nemiba” kufuneka ungabi nje kwenene sasicinga ukuba, kunene? Ezingenakulinganiswa ngakumbi inyaniso. Andinamntu ngenjongo babebangisana izibakala, uphawu Trayvon ngayo, okanye isigwebo kule ngxaki, kodwa mna ndicinga kwengxoxo kufuneka iqhubeke. Ityala i ngaphezu, kodwa akufuneki abe incoko.
Ndiyazi baninzi olucinga ukuba kutheni le tyala ethile iye wathimba ingqalelo ezininzi kangaka. Abanye basenokuzibuza isizathu sokuba abanye abantu abamnyama kangaka ngokukhawuleza ukuvelana Trayvon Martin, nangona ukuba imiba okukokwakhe. Emveni kwakho konke, akukho namnye kuthi khona yaye asazi kakuhle ukuba kwenzeke ntoni. Nangona oko kuyinyaniso, Mna ndizibona ngokweemvakalelo imali yonke le nquleqhu. Andikwazi ukuthetha, ngokuba wonke umntu, Ke mna ndithi kuni, ukuba mna ndazibona velani na Trayvon kunye nosapho Martin.
Xa usiva umntwana oselula abamnyama ndandibuya evenkileni, kwaye indoda wacinga ukuba mthetho phambi kokuba ukwazi into ngaye, Ndiya singazidibanisa. Ukuze kukwazi ukuba. Mhlawumbi Zange yalandelwa jikelele kwivenkile kwisebe njengonogada ngaphandle kwesizathu. ndine. Mhlawumbi soze ndiye evenkileni ekulungeleyo unobhala abangxolise ukuba ushiye, becinga ukuba olufundisayo on hip wakho umpu oceba ukuba kutolwe kuye. ndine.
Mhlawumbi Zange noncumo nabantu wambulisa sele kudlule esitratweni, kuphela ukuba baphephe emehlweni, iphi na impahla yabo, kwaye ngokukhawuleza bahambe. ndine. Mhlawumbi Zange Batyhalwe eludongeni, kubanjwa bempa-, kwaye emakhamandeleni ngamapolisa (ebekumele ukuba ukukhusela wena) kuba "khangela ngathi umrhanelwa ebesiyifuna.” ndine (ndaza ndabona nto injalo umrhanelwa). Zonke ezi ziganeko ezincinane namnye kubo ezisengozini kakhulu ebomini bam. uninzi, ukuba asingabo bonke, abahlobo bam nezimnyama zokuzila batyhubela kwiimeko ezifanayo. Nabanye abaninzi baye banyamezela, mandundu kakhulu.
Ukuba zange Ndiye ndazibonela olu uhlobo nto, ukuze uqonde ukuba le meko ongunoqo ngokunzulu nathi. Kodwa xa ndisiva ibali lakhe, Mna ndive ibali lam. Kwaye ibali kabawo. Kwaye ibali Unyana wam. Nam andazi kwenzeka ntoni emva kokuba uMnu. Zimmerman wenza sinoluvo ngalo mfana, kodwa phambi kwincoko, kwakukho nto engaqhelekanga malunga nesiganeko. Kwenzeka yonke imihla.
Agciniweyo wokwenene, kwaye oko kudla ngokobuhlanga. Abanye abantu bacinga ukuba isipho ndafumanisa uphawu ngokumjonga nje umntu. Kanye iyunifomu emnyama eluhlaza kunye nebheji kuthetha nokunyanzeliswa komthetho, ulusu kumnyama, odie kuthetha ngumgqithi. Akukho incoko yenzekileyo, kodwa iphepha rap ngengqondo iqhotyoshelwe apha. uphawu ugonyamelo izakuthatwa. Bacinga ngayo umfanekiso dreams bakubona kumabonakude, okanye ingozi abazali babo wathi kubo malunga, okanye ulwaphulo-mthetho embi abazibone - bayibeka yonke loo mpahla kwi umntu abadla abazange wadibana. never Sinelungelo lokuba izigqibo akugunyaziswanga malunga umntu- kwanokuba ngaba sele benawo ukuba ukhathazwa.
Ezi ndidi cingela elizothe ababuxoki. UThixo wenza bonke abantu ngokomfanekiso wakhe kunye nexabiso nokubaluleka kwento. Kodwa sonke sinesono yaye siyasilela ukubonakalisa ngokomfanekiso kaThixo njengoko kufuneka. Ngamnye kuthi wabuya ezonweni zethu, trust Krestu, kwaye kwenziwa kunene nguMdali wethu. Kodwa nangezisizilo ubuhlanga kwaye akhethe apho abantu ezi nyaniso kufuneka isetyenziswe. ubuhlanga uthi, "Mna ezixabisekileyo yaye kulungile, yaye bonke abo bantu bangendawo.”
Olu vukelo wazigwagwisa uThixo nokuchaswa kweVangeli yakhe kufuneka umdla kubantu bakaThixo. Asimele ngoyaba oko, kwaye kufuneka ukoyika ukulungisa na thina. Iindaba Ezilungileyo kukuba uYesu weza ukuze afele zombini aboni ubuhlanga non-elinobuhlanga. Ababesakuba ziintshaba babe ngabahlobo kuye, kwaye kuxhamla ngobabalo eyiyo enye. Ngubani sibhinqela phezulu, ukuqwalasela lo mba, livakalise inyaniso? Nokuba ngaba okanye ucinga ugqatso ngumba kule meko, awukwazi akhanyele ukuba ukugidima kungunobangela ubomi kangaka abaninzi kuthi yonke imihla.
Yintoni esimele siyenze ngoku?
Ngoko sifanele sisabele njani? Mhlawumbi kufuneka uqhubeke ngenye ingqiqo. Mhlawumbi kufuneka niyeke ukuxambulisana ngayo izinto sibe akaqinisekanga. Asazi ukuba zonke iinkcukacha olunye ngobo busuku; kungenjalo singe ngokuba ngamangqina. Kwaye nokuba sithanda isigwebo, ukuba ezandleni zethu.
Mhlawumbi kufuneka niyeke ukuxambulisana, kwaye uqale ethandaza. Thandazela iintsapho. Thandaza ukuba uThixo ukugcina isithembiso sakhe ukuthumela uNyana wakhe ukuzisa okusesikweni ngokugqibeleleyo. INkosi akuyomfuneko amagqwetha ukuyiphikisa iimeko zabo, kwaye akukho mfuneko ubungqina thaca. Ekungafunekiyo imfuneko jurors ukunika kuye nembono yabo. Ubona yonke, wazi yonke, kunye neejaji ngokusesikweni.
Kodwa ngenye ingqiqo, siya ngokuqinisekileyo khona ezininzi kufuneka uqhubeke. Asimele bayeke ukuthetha malunga nobuhlanga ukuba nangoku Ulalela kwihlabathi lethu. Ukuba Ndiye ndazibonela oko, ukunceda abo sebunzimeni ukuqonda. Yiba nomonde nabahlobo bakho njengoko ukuthantamisa bafuna ukuqonda oko sele ndigqithile. Kwaye nceda musa ndibalinge kunene lifezekise iingcinga ezigxekayo. Trust Krestu, ukhunge uThixo asibumbe umlinganiswa yakho ukuba ikhangeleke ngokungathi ngaphezulu bakhe.
Ukuba zange ubukhe kwi abafumana socalucalulo, novelwano kwabo. Funda ngamava abo. Awukwazi uthanda ubani ukuba ngoyaba okanye ayijongele ezibaxhalabisayo zabo. Nceda bacinge ukuba abantu ukhalazela nje kunye nokudlala "ikhadi ugqatso.” Zama ukuqonda ukuba, uze uhloniphe into yokuba abanye bethu bahlala izinto ezahlukeneyo kwaye kufuneka sinyamezele izilingo ezahlukeneyo.
Nokuba wenza ntoni na, nje musani ukuyeka ukuthetha ngayo.
jonathansampson • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:09 mna • impendulo
T.L., Ndiyaxolisa ukuba ubukhe ngenxa kwezinye izinto rough, kodwa lo mzekelo esithile kwakungabonisi nobuhlanga America. George wayengekho qiniseki yohlanga Trayvon de kamva kwi 911 call, xa Trayvon waqalisa ukuhamba indlela yakhe. Trayvon kwakujongwa njengento ibitheni kuba wayehamba phakathi nangasemva izakhiwo zokuhlala, ukubonakala ukuba ufuna ngeefestile. khumbula, lo loluntu waba umtya lekhefu-ins kunye zoqhekezo. Kungenxa yoko le nto Trayvon wakhangela ibitheni. Wayesele ehamba ecaleni kwendlela ekukhanyeni isitalato-izibane bendawo, George ibingayi batted iliso.
I kabuhlungu ukuba mfana owayemphathela izikhali; kodwa ndiziva ngakumbi eyoyikekayo konke ilandelwa ngenxa yale meko ukuba uchazwa umzekelo we ubuhlanga. elivisayo abamnyama Five e Baltimore yabamba umntu kokufika ngabathwali bempa- izolo baza bambetha “for Trayvon.” LAPD ziye nokusabela noqhankqalazo ezincinane ukususela okusisiphumo se-engenatyala engena. Le lobuhlanga fake lisikizi, kwaye Iyangxola abantu, awabancedi.
Yintoni endibulala kwakhona kukuba le nto ayikho nje kwenzeka kubantu abamnyama. I waphathwa kakubi ngoontanga bam abamnyama esikolweni phakathi. Ukuwa phantsi bleachers, uxhatshazwa, yaye amenza. Kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo ndityelele i kwikhampasi zonke-omnyama-oyindoda college apho wayezenza Black Girls Code. bezama nje ukuya imoto yam mna ndadibana ngezithuko nezoyikiso kubafana college Zange ndacinga ukuba ndifuna fanele on campus.
Umama nje kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo apha e Georgia kweza kuye 17 konyaka ubudala yaye 14 umnyaka ubudala (kwakhona, zombini abamnyama) e 9am lidubule naye emlenzeni, yakhe 13 ngenyanga baby endala ubuso. Oko kungenzeka ibe kutheni abantu yemoto ngamaxesha. Ngaba le mpahla? Ngaba kuba inkcubeko hip hop ukuba freaks abantu? Kusenokwenzeka ukuba. (Okubuhlungu Ukuba yinyani, kodwa kuyaqondakala).
Enoba inkinga, Ndiyathemba Sithandazela ukuba isisombululo eya kusinceda ukusindisa ubomi babantwana bethu abancinane, kungakhathaliseki ukuba ngabaluphi na uhlanga. Ndiyaxolisa kwakhona ukuba ubukhe ngenxa kwezinye izinto zingandihambeli kakuhle, kodwa ukwenza lo mzekelo Trayvon / Zimmerman uhlanga swi nga pfuna ukuqonda kwethu, ngayo ichaphazela indlela it.
YOURSTRULY • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:10 mna • impendulo
enhle kwaye kambe niyatyapha. Ubuhlanga iguqulelwe kwaye iye yaba yinto entsha lonke “iiprofayili” kwaye kwenzeka phakathi kwabantu abo bathi ngokwabo ukuba ezahlukeneyo. Lo mfo isuti kwaye ntombazana a Thong njani… iiprofayili macala onke yaye kunzima ukuphambuka, Akusayi kuba ayiqali ukuba ibala lolusu zabantu. Ngaba nabuganga bakuthetha ezinye izenzo zolwaphulo-mthetho inetyhefu kakhulu lobundlobongela exube. Kungani lo? Thina kuphela Sinethemba lokuba ubuhlanga akukho waqhubeka kuAzazele kunye nabantu ngabanini ukuya koko usexhaleni ngakumbi ngokwabo kwaye amkele omnye. Iiprofayili kulusizi, kodwa Trayvon agciniweyo “crackers amhlophe”. Ngoko ke lets thatha akukho cala, kodwa ubone zonke engile. Ngaphandle kwamathandabuzo elifanelekileyo, engenatyala.
Marvin Lee McManus • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:11 mna • impendulo
Yintoni endibulala kukuba kangaka ngokukhawuleza ukuze bakholwe ubuxoki George Zimmerman wamxelela malunga nendlela wayefuna Trayvon Martin kungena iifestile kula makhaya kulo mphakathi. Kwakhona, akukho namnye kuthi khona kodwa uThixo wabona yonke nquleqhu kwaye kufuneka ibalelwe phambi kwakhe yena yedwa. Yintoni irks ndim na isibakala sokuba kufuneka siqhubeke esiya emva naphambili nale yonke ntoni lo mntu omnyama benza lo mntu mhlophe kodwa akukho olu lwaphulo-mthetho lwenziwa. Loo nto nobunemveliso konke. I nivayo umsindo yombango abalwela amalungelo ukufumana inxaxheba nokwenza uhlanga lo, sonke sidlala indima. I faka ukuba udaba lwakho kufuneka lube kunye kumajelo eendaba kunye nabalwela amalungelo oluntu okanye abanye baqonde ukuba uhlanga idlale indima enkulu kunokuba ukungeniswa. Uyabona, eendaba kuphumelela ekudaleni imbambano njengoko kulungile lwamanqaku zabo. ixesha Last Ndiye, komthombo eendaba enkulu ayizange eyale abambalwa. Yeyona uthando imali yingcambu yazo zonke iintlobo zobubi. Xa thina ajongene kakhulu ekwenzeni inzuzo ngokuchasiweyo umonakalo ukuba ekuzo kuluntu abantu, kukho ingxaki enkulu naye. Ndinebhongo ukuba nithi ndingubani na umntu ukuzalwa kwakhona ngumntwana kaThixo. Oko akuthethi kuthi Ndilahla sizathu le window. Oko kukuthi ukuba inyaniso isoloko ukwamkela kungakhathaliseki ukuba ngabaluphi na uhlanga lwakho. Le amanga ngokungakhethi wamxelela lo mfana, kungakhathaliseki yakhe yangaphambili, kunye characterizations ezingalunganga yena baze uRakeli Jeantel, bonke baya ukungqina ukuba uhlanga yiphi. Kwakubuhlungu entliziyweni yam ukuba eli tyala yaphela ndlela ngoba Trayvon Martin kubonakala ukuba wayebulewe kabini. Inyaniso real ibuhlungu yile, kukho ukunqongophala yimfesane ngenxa yokuba umntwana, nokuba iingcinga zakho ngaye, waphulukana nobomi bakhe ngokungenangqiqo kwaye Akukhathaliseki ukuba uhlanga lwakhe. Akukho mali uyiphikise uya kuke Trayvon umva kwaye akukho mali ekhalazayo ezakuzisa enetyala umbulali yakhe. Yintoni esimele siyenze ngokwenene sibe novelwano ngakumbi malunga nenye sizibuze, ntoni, ukuba abe umntwana wam okanye omnye omthandayo. Enoba ngubani owenze uphumile okanye akaphumanga, ubuya ndizive ngendlela efanayo? Nje ngokuba FL inomthetho akuthethi ukuba umthetho trumps ilizwi likaThixo. Enoba kwenzeka ntoni na, Uze ungabulali? ubulungisa bukaThixo buya kusoloko koyisa. ngoku, Ndiza kuhlala emva balinde ukubona ukuba ngubani akayi kuva okanye ukuqonda intliziyo esi sithuba kwaye zama esikolweni nam kutheni becinga abasabela nangoku ezaziphaphatheka zinkulu.
jonathansampson • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:11 mna • impendulo
Uyavuma ukuba akukho namnye kuthi khona, kodwa bathi George elele malunga Trayvon looking nokusola. Ukuba bezingekho, Ziziphi izizathu ntoni na ukuze ngokubiza George ulixoki?
ngaba phi ingcamango yokuba ugqatso wadlala indima kule? George wafundiswa abantwana abamnyama, wathatha intombi omnyama ococek, yaye ubuhlobo kunye ukuhlonitshwa kwezinye abamnyama kubamelwane bakhe ubungqina ukuba umntu onesimo esihle.
eyenkomo wam kakhulu ngokuqinisekileyo kunye namajelo, ubani unelungelo ngaphandle kwesango uhlanga-baiting ngokuthi Zimmerman a “amhlophe-kokufika,” khon 'ukuze umlilo phakathi kwabamnyama nabamhlophe. Emveni kwakho konke, ukuba akukho nayiphi na impikiswano, abakwazi bathengise isithuba ad.
Ndiqinisekile ukuba George kunye Trayvon sibuyele umva uye kuloo ngokuhlwa, Babeza bobabini benza izinto ngokwahlukileyo. Oku akuthethi ukutshintsha into yokuba Trayvon (akukho umfana, kodwa indoda) wafa ngexesha straddling Zimmerman, funa ukumbakraza intloko yakhe eziphathekayo ngokuphindaphindiweyo. Oku wazalwa ngaphandle kokuba ubungqina ebonisa amabala ingca emqolo Zimmerman ngayo, kwakunye nobungqina eye-ingqina ukuba Zimmerman waba phansi.
Mna buhlungu yi ukufa komntwana, kodwa mna buhlungu ngakumbi ukufundiswa kunye nendlela yokuphila umntwana wakhulela macala. Njengoko Jeantel kuchazwe ngokucacileyo kakhulu, usuka kwindawo ukuba abantu abamhlophe ukuba basiqonde. Indawo apho elivisayo rhoqo abatshayayo imbiza, indawo apho kuthiwa abantu abamhlophe “crackers”, kunye nokuninzi. Le yokuphila hip-hop uya ukugcina ebulala abantwana.
I uthandana intombazana emnyama xa wahlala eChattanooga kwiminyaka umva lowo nabakhathazwa ngoontanga kuba yena “white omele” sithobela. imfundo. njani nale ngxaki kuvela phi? Ngokuqinisekileyo ayikho kona abantu abamhlophe ukuba abantwana abancinci abamnyama ukugculela abanye abantwana abamnyama ngokuzama ngokwakha ebomini.
Ndizama ukwenza indima yam ekuncedeni. Njengoko injineli software mna ngokuzithandela yaye bancedisa ekusasazweni uthando lwetheknoloji kanye iinkqubo phakathi namantombazana Atlanta-based abamnyama, ukusebenza kunye namalinge emangalisayo ezifana Black Girls Code. Kanye ngoku zonke ezi abantwana kufuneka ukuba bajonge ukuba kukho iziqhulo ezifana Nikki Minaj, kunye wannabe-namatshijolo rapping ngesondo, imali, neembadada.
Soyiswe abantwana bethu abatsha abamnyama.
Yintoni injongo bavakalisa ukuba wathandana intombazana emnyama xa eChattanooga bakhonza? Akuyomfuneko ukuba ukwazisa ukuba kum ukuhlonela uluvo lwakho. Nantso into nje sizalwa. Isibakala sokuba ukunceda ulutsha abamnyama akuthethi ndanahlula kwezinye nayiphi na abemi abamhlophe nokuba. Andenzi esithi ukuba athetha bayakudelela kodwa siziphekuze usola. Le ntombazana omnyama oyisebenzise mhla na umntu emnyama kuphela ukubandezeleka naluphi na uhlobo ukuhlekwa nokuba ngumntu omhlophe, umntu omnyama, okanye nabani na ongomnye. ngoku, Andikhange sithi babengekho apho. Kodwa ingazikrwela ubuxoki, usoloko isela. Nje ngokuba George Zimmerman ekhankanywe zonke ezo zinto malunga nabahlobo abamnyama, nothantamiso abantwana abamnyama, kwakhona, aluthethi nto. Ukhe weva bulu elithi? ngokunjalo, ukuba kuyana kwaye ndizama ukufumana ekhaya, Andinalo ixesha ukuba peeking kwiifestile nabani. Kodwa ukuba wabulala nje umntu ukuba ndicinga ukuba ibitheni, Ndingathanda kufuneka senze konke okusemandleni am ukuchaza abo ukukrokrelana. Libizwa ngokuba embellishing inyaniso. Ekupheleni kosuku, akanyanzelekanga ukuba nokundijonga. Uza; kunjalo, ujongane noThixo, Ewe yena engenalo, Nokuba ndadana ne sigwebo, wena okanye nabani na ongomnye na izizathu zokuthethelela kukuba uhlanga akazange adlale indima kule isiganeko; ecaleni, kumajelo eendaba, , nditsho nangoku. Ukuba uhlanga akazange adlale indima, akukho nanye kwezi zimvo kuya kuthetha ngayo kangaka. Yaye nje evela kubantu abamnyama. Kuyamangalisa kum ukuba uthethe malunga icon rap ukuba abantwana ukuba ngokungathi oko kuphela abantwana abamnyama ongathanda ukuba ujonge phezulu. abantwana White are ngakumbi Nikki Minaj kunye Lil Wayne kaThixo ngaphezu kwakhe nabani na. Xa une isiko yabantwana abamhlophe ezinokuthi ukuqamba igama, “wigger”, nceda musa ukuziqhatha ngokukholelwa ukuba abantu nje abamnyama. Ngolunye uhlobo, kukho kusibiza kumacala omabini kunye nentiyo kumacala omabini, kodwa sicela phaya xa uzama ukuba acinge iingongoma ukuba ufuna ukwenza ukubonisa isizathu sokuba George Zimmerman ecaleni.
jonathansampson • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:12 mna • impendulo
Nkosi, Mna ndithetha kumava wam. Kungenxa yoko le nto ndiye wathetha ex yam Tennessee, yaye kungeso sizathu ke obalulwe ukubandakanyeka kwam kumaphulo wadala ukuba ukukhonza abantwana abamnyama. Okubuhlungu ndikwazi ukunika ubungqina ngokupheleleyo, kwaye kuthathelwe ingqalelo nje elinye emhlophe-nenkomo ngabanye.
Ndiyazi ex yam intombazana emnyama kuphela ukuba nantlonelo. Yintoni mna bebonisa kukuba abantwana abancinci abamnyama ziphuma kwiindawo ukuba musa kukhuthazwe lobuqu. Oku akunjalo kuba bonke, kodwa ngamava yam ukuba uncomfortably eqhelekileyo.
Nize ninqule George intshembenxa, kodwa waphinda, ngokusekelwe koko? Ngaba uyazi George? Ngaba nawe khona ngobo busuku? Oku akuthethi ukuba uGeorge uthe waba abahlobo abamnyama, ukuba ubungqina ngayo abamnyama kubamelwane bakhe ngomlomo lokubonisana. Ngoko ke yintoni isizathu sinako ubhalo lwakhe mbuzo xa bonke ubungqina bubonisa ukuba ayikho, kwaye akuzange, ngebala?
Ukuba uhlanga wadlala indima, phi na ubungqina ubonisa ukuba? Le ukukhankanywa kuphela uhlanga esinayo kulo mzekelo yonke yaba amazwi Jeantel, owathi Trayvon ekuthiwa uGeorge a “zezinambuzane esile cracker,” yaye kamva a “nigger.” Kwafika ehlaziya ngokobuhlanga evela Trayvon, yini George. Jeantel wangqina ukuba kummandla wakhe, yiloo nto abize abantu abamhlophe.
Andizimisele ukupeyinta abantwana mhlophe ezinye uhlobo Angel. Mna ndithetha iimpembelelo yenkcubeko kubantwana abamnyama kuphela ngenxa yokuba siza sithetha Trayvon kule meko. Mna abagulayo indyebo ye nomqondo thug phakathi kwabantwana abaselula emhlophe, njengokuba. Unyana wam, ngubani na bi-ngokobuhlanga, akayi bakhula iblukhwe zakhe ngamadolo akhe, shirts oversized, yaye isimo sengqondo leswaku kuxhaphake disinterest. Andifuni ukubona phakathi yabantwana abamhlophe, kids abamnyama, kids kokufika, okanye nabani na ongomnye. kunokuba, Ndifuna ukubona ukwenza ngcono ngenxa ngokwalo esi sizukulwana esilandelayo.
ndiyakuthanda, ubhuti. Kwaye kakhulu uthando lwakho. Wandithuthuzela ngenxa yokuba thina sobabini sithandazela nenkathalo le sizukulwana esilandelayo, kwaye sifuna ukubona ngakumbi ukuphumelela kunangaphambili. inkosi ikusikelele.
Marvin Lee McManus • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:12 mna • impendulo
jonathan, oku kuya ndawo ngokukhawuleza. i akazange afunde iposi yakho yonke, ngokuba andiyi ndizama ukuba ukungaboni nawe. Ndivumeleni ukuba bathi, Andikubizanga George Zimmerman intshembenxa. I nje wabhekisela ilizwi. Ngaba wena uzelwe ngokutsha ngumntwana kaThixo? Ukuba kunjalo, kutheni na bantering emva naphambili? Yintoni uzama ukubonisa. Andikhathali uhlanga Trayvon Martin likaThixo, waphulukana nobomi bakhe xa engazange abe kakhulu. Wena okhankanywe kwezinye iposi yakho yena umfana. Hayi, yena wayengekho. Njengoko kakubi nje sifuna ukuba igcwaliswe ngaphambile ukuze uGeorge Zimmerman kuphindwe wagwetyelwa ekuthatheni ebomini bakhe, ukuba esengumntwana. 17 ubudala ulingana umntwana. Yena akazange ikhule. Yinto lusizi kakhulu kunye nokwehlukana ezenzeka abamnyama nabamhlophe kunye ehleli emva ngolu hlobo ngumdlalo kwaye nayiphi na iqela ntsimbi zilapha phezulu amanqaku amaninzi liyaphumelela. Ibuhlungu nje plain. Ukuba Trayvon Martin waba mhlophe George Zimmerman waba abamnyama, Ndingathanda ndizive efanayo ndlela ndiziva ngoku. Kodwa inyaniso ebuhlungu kukuba, waba George Zimmerman abamnyama Trayvon Martin kube mhlophe, oku bekuya kuba isiphumo kakhulu ezohlukeneyo ukuba wayeya kuba ubanjiwe ngosuku 1, emi amasimi akhe okanye hayi kwaye isigwebo kakhulu ngokuqinisekileyo ukuba ohluke kakhulu. Zive ukhululekile ukuba ngumhlobo kum nayiphi yokuphuma kwimidiya unqwenela ukuba ufuna ufumane ukuva kwe oyena mntu ndinguye; kunjalo, kule ndawo, Ndigqibile ndisiya emva naphambili kuba njalo akuyi ndawo. Ndiyabulela iimpendulo zakho nakuba.
Nathanial Poling • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:13 mna • impendulo
Marvin, kufuneka ufunde izaziso zakho… kokuba uye kwi uhlaselo ukususela ekuqaleni lo gama usazama ukudlala “yokungayi” ikhadi. Wena kuthiwa Zimmerman lixoki ungumbulali uze uhlasele umzalwana wakho ezimhlophe egqajukelwa incoko civil. Ngesizathu, Zimmerman i kokufika.. Andizange ndive umntu asibize uMongameli Obama emhlophe kunye nale ngongoma iyodwa ibonisa bias yakho. uluvo lwam siqu kukuba eendaba ukuvuthela oku imfazwe uhlanga xa isixeko ngokwenene ngaphakathi nxamnye namadlelo umba lokwenyaniso. Kukho ukuziphatha ezithile ezifana ehamba phakathi kwezindlu ezingekho eqhelekileyo nokwahlulwa okanye uluntu hlwele. Nawuphi na umntu qela wayeza kufumana oku ukuba ukuziphatha ingumnqa. Oko kwenzekileyo emveni koko iya kuxoxwe ngonaphakade njengoko kungekho mntu khona ngaphandle mfo elinye kunye ngelithi wajonga bonke ubungqina yaye walawula ukuba ibali lakhe ibanjelwe phezulu ngokwaneleyo ukuze unjengonetyala kuye.
Marvin Lee McManus • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:13 mna •
Nathanial, Andigqithanga bahlasela nabani. I nje kwabelwane ngezimvo zam. Nakuba omelele, ngabam. Kuya kufaneleka ngaphezulu ukuba uthi
“Ndiva ngathi ayehlasela umntu”. Ndiyazi ukuba kwam lonke yaye akazange ababulale uYonatan kwaphela. izimvo zethu zingafani yaye bethu ukutshintsha iingongoma zethu ngayo, kodwa kunjalo exoxa. Ethetha bias, bobenu nayo sisinyanzelo. Ntoni George Zimmerman aqhubeke kokufika ziye yakwenza ebonakalalisa ukuba oku uhlanga? Ngaba isiganeko na esekelwe kubuhlanga ukuba ngaba kwenzeka phakathi ilungu uhlanga abamnyama nabamhlophe? ntoni lemveli uMongameli Obama kaThixo Yintoni na enam elikulomsonto? Bendisoloko wavuma uyinyama uhlanga yintoni. Ngelishwa, kukho abo babeza mqondeni abamnyama nje ngenxa yebala lesikhumba yakhe. Ewe, Ndathi George Zimmerman waba lixoki kunye nombulali, la mazwi ayinyaniso. Nje ngokuba ngelithi ugwetyelwe kuye akwenzi bangabobuxoki enye. Ekupheleni kosuku, kanye yintoni na ingongoma ukuba ozama isando ekhaya? Ndiyaxolisa ukuba uziva ngathi mna ngokuhlasela nabani. Ngaba abavunyelwa bona ukuba bathethe uluvo lwam kanye njengoko wonke umntu kule ingxoxo ngaphandle kokuba ityala ngenxa yokuba into endiyaziyo Andinguye?
pepjrp • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:15 mna • impendulo
UThixo uza koyisa, kodwa wenza ngokobuhlanga. Wena ngoyaba izibakala kwimeko kuba uMartin emnyama. Eso sizathu kuphela. Martin wahlasela Zimmerman emva kokuba anyamalale imizuzu embalwa. Akukho ukubulala kwenzeke, Wena abalazi njengoko 10 ngo-1000 abaya ukubona oku thru ngokobuhlanga olunombala iindondo.
Marvin Lee McManus • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:15 mna •
Ndiya ukufumana ukuba kunokuba hilarious umhlobo wam kukuba wena benza ingcamango ngam ngaphandle bandaziyo. Kolunye blog apha (emva Trayvon, Ngaba Kukho Yiba Justice for yaseFlorida Okunye Yima Victim lakho Ground?) ku Disqus, umntu wandibiza a “nigger” kuba nje iinkolelo zam engafani. Ngaba uphendule? Hayi. Ngoba kutheni? Ngokuba ndiyazi mna ndingubani noko imele. Yinto ezihlekisayo kum ukuba zibhekisela kuThixo ekhoyo ngokungathi ukuncwasa ukuba ungumKristu. Okokuqala, Mna elikhuselayo nje Trayvon Martin ekubeni wabulawa ubusuku ukuba sibi kwaye iyaqhubeka kubulawa. Bendingaziva ngendlela eyiyo enye ukuba nguye kancinci itakane abamhlophe nabo noGeorge Zimmerman abamnyama. Yinto call ekwaziseni abantu. Uyabona, George Zimmerman ungumbulali. Yena devalued ubomi bomnye bomntu ngenxa kwengxabano yena waqala. Kungakhathaliseki kwakhe akade “yomntu” mthetho, umthetho kaThixo wathi “uze ungabulali”. Wenza ntoni? Wambulala xa imeko lonke ngebekhuselwe. Into ukubiza lobuhlanga nto ngaphezu izizathu ezisekelwe kwixabiso ndizibeke ubomi Trayvon bakhe. Ngaba ebenomsindo George Zimmerman, hayi akunjalo, uya kujongana uJaji yakhe. Ngaba undicaphukisile kwi Yima uMthetho wakho Ground, ewe ndim. Ukuba zange ukukhusela i ababhinqileyo, Marissa Alexander, adubula emoyeni umyeni wakhe, yaye ekugqibeleni kwaphumela 20 isigwebo seminyaka kuye, akufanele ukuba isicelo George Zimmerman mhlawumbi. Ngokuba ukuba athathe nto malunga izibakala zam babengamnanze nokukhusela kuphela Trayvon Martin kuba omnyama ubonisa mna icala lakho kunye nobuhlanga ehambisana vekeleke lwakho uhlanga-based. Yinto kubonakala ngakumbi engentle ngayo “10'S-1000 abaya ukubona oku thru ngokobuhlanga olunombala iindondo”. Enkosi indenza ndibe sihleke nakuba.
pepjrp • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:16 mna •
Sonke njengamaKristu bavumelekile ukuba ubomi ukuba wethu usengozini… yaye kubonakala ukuba Zimmerman yaba. Kubonakala ukuba anithanga Zimmerman inzuzo leyo. Ukuba kanti akunjalo uhlanga isekelwe, ke acele uxolo lwam, kodwa ke omnye bambalwa kakhulu ukuba akukho. Kodwa wena ungumKristu kwaye phantse bonke abanye ukuba ndithethe intanethi ngeke, ngoko ndiza kukunika ukuba intlonipho. Kodwa ke kucacile ukuba amanye buxoki malunga ityala ngaphandle ukubona okanye ukuphulaphula ngokwakho. Kulapho okubi kwam kuza. I kungekho enye indlela inkolelo okanye enye de wachitha ixesha ukufumana izibakala ezininzi ndinako. Kwaba Okumangalisayo oko ndafumanisa. ngoku, Ndiyabona ukuba abaninzi basebenzisa ityala Marissa Alexander ukuba wambhakraza Zimmerman sinqumo. Ngoku andazi kangangoko ngalo njengam lo, kodwa ndiyazi ukuba Alexander wathenjiswa 3 nyaka nesicelo deal ukuba wajika phantsi. kanti, Andizange ukufunda loo nto kwizithuba nabani. Kukho kwakhona ubungqina wayengase ngasekhohlo zabuya emva kokuba eye, kodwa andazi ukuba ukuze uqinisekise, kodwa yinxalenye lwetyala notshutshiso ngayo. Kodwa kukho isizathu enkulu sokukholelwa ukuba Trayvon Martin ngasekhohlo nayo waza wabuyela. Kwakukho imizuzu apho Zimmerman uthi ifowuni ukuba 911 dispatcher ukuba akazi apho Martin na. Kodwa wayengazi ukuba ngenxa yokuba akazange azame ukwazi ukuba, ukhe wa? ukuphawula yami of “10'S-1000 abaya ukubona oku thru ngokobuhlanga olunombala iindondo” limi njengoko ngaphezu yinyani. Kukho inala abamhlophe bakholwayo Zimmerman unetyala kuzo zonke iintlobo nezizathu, kodwa ke kukho phantse akukho abamnyama abaziva Zimmerman abe msulwa Oko ke bonke ubungqina esilwela udinga.
Marvin Lee McManus • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:16 mna •
Nceda ukwenza inceba Yiphelise xa uyibona. Njengoko a christian, kufuneka wazi bhetele kunokuba ukuzama abathethise nam malunga buxoki abakholwayo. Oko kuthetha ukuba uyakholwa yonke into ephume emlonyeni George Zimmerman ngayo inyaniso. Andiyi ndachukumisa ukuba ngenxa kwakhona, UThixo kuphela nguMgwebi yakhe. Okukhona uzama isandi namkhethe kwaye ubengo, malunga nale meko, kubi kuba. kwaye kwakhona, ukuyeka nokuzazisa uyazi kangakanani le meko Ndandiphulaphula ngokwam. Mna ukufunda kakuhle a kakhulu, bayafundiswa, umntu okwaziyo ukucinga ngokwam, ngaphandle imvakalelo. Nceda undixelele kwi bible apho ithi ukuba ubomi bakho busengozini, ungakwazi ukuthatha enye. Uze ungabulali kuthetha kanye. Kwaye nceda yiba nosizi ngam nala macala kwawo umnqophiso omdala ezibe ixhaphake ngenxa yobabalo lukaThixo engafikanga kwi ndawo. I Marissa Alexander icala, ayinamsebenzi, isicelo deal okanye hayi, ukuba waziva ubomi bakhe baba sengozini, waba zonke unelungelo liqine. Wena zixhasa umthetho oye ebotshelelwe zibe ukuncwasa obabuvakala elinobuhlanga, kwaye bazama ukuyithethelela, kwakhona, akukho ukuhlolisisa. ngokunjalo, ukuba uziva IBhayibhile ibonisa ukuba ubomi bakho busengozini ungakwazi ukuthatha enye, njani Uvakalelwa njani izisu eziyimfuneko kwezonyango. Nje ukwazi ukuba ukwazi. Kwakhona, ekupheleni kosuku, izimvo zakho zezakho awuyitshintshi, akukho bavuke. Umahluko kuphela, zam ibangele ngokwembono ehlambulukileyo nobuntu, ezakho nje umsindo nokuxakaniseka ukuba uzive lo mba uhlanga. Bona umahluko?
Nathanial Poling • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:16 mna •
ngoko amajoni zokulwa netyala lokubulala?
Wena nje wabonisa ekungazini kwenu okanye ukusilela nje jikelele ulwazi… Yima Ground yakho abangazange esetyenziswa yi ukuziphendulela kwimeko Zimmerman, umsulwa kude ngaphandle komthetho. Ngaphaya koko loo mthetho isicelo 2 ukuba 1 kwi ubabalo abantu abamnyama lokuziphendulela nxamnye nabanye abantu baseMelika Afrika ngaphandle abelungu usebenzisa umthetho.
Antoine Mason • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:17 mna •
Nantso ingxelo entle ngokobuhlanga.
Nathanial Poling • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:17 mna •
into ngebala? kwakungekho nto kuloo mazwi ukude ngokobuhlanga
Marvin Lee McManus • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:18 mna •
Enoba ufuna kangakanani ukuba unqwenela kude umthetho syg, i Iingxoxo kunye ne umphumela ulwimi ngokusondeleyo wafana syg verbiage. SO theory kuba nje syg akazange becela, ayithethi le nto isiseko ngesigqibo. Ngaphezu, nceda phaya manani zakho ngaphandle kokuba uyakwazi up kubaxhasa ubungqina. Kwixesha elilandelalayo, ingqalelo ulwimi lwakho xa ufuna sicinge ukuba umntu akazi nawe ngokuba ningazi ukuba uyakholwa ngokwenene ukuba sigqibo syg wadlala Aninasabelo ngesiphumo sokugqibela. Nokuya kufikelela njengoko wenza up izibalo zakho, nceda ujonge nokuba ezi zinto zilandelayo…
Yonwabela Usuku lwakho.
Nathanial Poling • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:22 mna •
na ngokwenene nje post embalwa blogs random?
Ngoku lets badlulele kwezinye manani real:
Kodwa malunga nomfundi omnye kwisithathu Florida "Yima Ground Yakho" kwamabango
amatyala ezibulalayo ziye eyenziwe abamangalelwa abamnyama, kwaye baye basebenzisa
ukuziphendulela ngempumelelo 55 ekhulwini ngelo xesha, ngomlinganiselo ofanayo
labantu ngokubanzi kunye ngeqondo ngaphezu abamangalelwa ezimhlophe,
ngokutsho uhlalutyo Daily labafowuni kovimba weenkcukacha igcinwe batampile Bay Times. Ngaphezu, uninzi lamaxhoba e Florida "Yima Ground Yakho" amatyala ziye abamhlophe.
AmaMelika Afrika wasebenzisa "Yima Ground Yakho" zokuzikhusela kwi phantse kabini izinga phambi kwabo abemi Florida, elo ezibekwe 16.6 angu 2012.
Ngaphezu, I nje ukufunda ityala eNew York ngo 2009: http://rochester.ynn.com/content/top_stories/490926/jury-finds-roderick-scott-not-guilty/
Uhlobo uphikisa uhlanga lonke ikhadi ingxoxo uMongameli Obama kunye nabanye edlalwa nale meko ukuba omdala omnyama kwakungayi kuba msulwa ukuba wabulala umfana emhlophe.
Marvin Lee McManus • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:22 mna •
Andiyi ukuba ukucinga nto kuwe okwephanyazo ngaphandle ngokucacileyo ukuba musa ungathanda ukuba kuphosakele yaye nani nithandane ukulwela umthetho impikiswano. Nokuba ufuna ukuba ayamnkele okanye hayi kwaye afumane izibalo exhasa esibalisayo yakho, njengoko ubani, imithetho syg, nokuba alinakukhuselwa kulo mzekelo okanye, ukuba eyakhelwe-ngaphakathi ukungalingani ngokobuhlanga. I akananto injongo zisaqhubeka nkulumo nawe. Ngoba? Ungabuza. Kuba ungenzi lutho. uluvo lwakho akayi ukutshintsha yaye akukho ngowam. Ngaba oko kuthetha ukuba andikwazi okanye musa uyazihlonela? Hayi akunjalo. Oku kuthetha mna ndidikiwe abulale ihashe efile nawe. intetho Civil oswele ngokwenene kolu hlanga yaye oku kungqina ukuba ube indlela ende ukuya ukuze sikwazi ukuba sibe kuphela uhlanga oluphantsi. Ndithandaza uthando lwakhe okusaqhubekayo intliziyo yakho kwakunye am yaye nabani na ongomnye ngubani akhubeke phezu le blog. Yiba ngokuhlwa enkulu.
Ndiyabona ukuba weza impendulo yam. Ndiya kuthandaza kuwe kakuhle ukuba uThixo uza kuziphelisa wakho “uhlanga” blinders ezichaphazela iingxoxo zakho. Ndiyazi ubuhlanga ndiya kusoloko kubakho kuzo zonke iintlanga kwabanye kodwa kukho abanye abantu ukuba baye bafudukela ngaphaya ngokobuhlanga zonke siganeko ayisoloko ukuba yakwenza ibala lolusu. Bendiya kuba inkxaso ukuba ubungqina wabonisa ukuba Zimmerman waba netyala lolwaphulo-mthetho, kodwa ndiya kuqhubeka ukuphikisana nabani na ephenjelelwe kakhulu i phantse 100% media emhlophe kungokunyhwalaza, ukupeyinta eli bali ibe into iza kutsalela ababukeli e ndibenze babe nemali engakumbi kwakunye lokutyhala ajenda zabo anti-gun. Bathi doctored ividiyo, iiteyiphu ezimanyelwayo kunye namanye amabali amaninzi ukuze rile phezulu uluntu Afrika American kwaye ndiyacinga ukuba oko travesty. Ndiyathemba Zimmerman amangalela iblukhwe zabo culo kwaye banyelise.
Marvin Lee McManus • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:23 mna •
Ngoxa ndithandaza ukuba uThixo lisusa blinders uhlanga emehlweni am ngelixa kucingelwa ukuba sisizathu I ubambe izimvo I ubambe, nceda uqaphele ukuba umthandazo mhlawumbi akayi kwenza ezidlulileyo uphahla lwakho. I weza impendulo yakho kuba ndiziva imfuneko ukuphendula kuwe xa bengazi into oyithethayo apho iyandixhalabisa. Awukwazi mix umthandazo uthando ndizithiyile zonke ngaxeshanye. kwingcinga yakho ngenxa nje Trayvon uMartin abamnyama kwaye isizathu ndiziva indlela yokwenza akukho bubi. Andiyi ukukhusela ukuba imbono phambili kwi yakho okanye nabani na ongomnye kuba ekupheleni kosuku, uza ndizive ngendlela ukukwenza kunikela ngawo. Ku ndelelo njenge ikholwa ukuba bazame ukuza ngapha ngendlela wena xa obaziyo wena ukuba ubulumko inqununu-unikwe nguThixo ukuba yona isetyenziswe ukuba kuhlwe inxalenye George Zimmerman kaThixo, ngesiba ukuba le ngxoxo. Ubona umhlobo wam, USathana uza yahlula, yaye ngokuqinisekileyo wenza umsebenzi wakhe lo mba. I yokuveza uluvo lwam ngokuba ethatyathwe ubomi zomfana–KHOMBA APHO KUNGEKHO NTO, YEXESHA! Isibakala sokuba ube kangaka emxinwa-nye ngalo bethatha ukuba kuba mnyama kwaye Trayvon Martin omnyama, Ndiziva ngale ndlela, ayinangqondo ngokucacileyo. Ngokuba ukuba ukuthetha malunga blinders uhlanga ezinweleni amehlo am ngoxa unxibe ngokucacileyo kuzihlalela ehlekisayo kum. Kunokuba ethandazela omnye umntu, ungafuna cela kuThixo ukuba ukuqala ngentliziyo yakho kuqala. Kusenokwenzeka ukuba bathi nqa yiloo nto Yena utyhila kuwe.
Nathanial Poling • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:23 mna •
ukuba uqalise nge ukuthandaza, ngoko musani abathethise kum into uthandaza. Ndicinga ukuba kufuneka ukukhangela intliziyo yakho, kwakubonakala oku uhlanga kuba kucaca oku kwakuya kuba wayenza ezidlulileyo iindaba zasekuhlaleni kunye ezintliziyweni ezininzi abantu ukuba eli tyala waba amnyama abamnyama okanye Mnyama kokumhlophe. Ukuba awufuni ukuba nazo izibakala, ukuba le yindlela ozikhethele yona kodwa kukho amatyala amaninzi exhasa imbono yam kuquka umntu omnyama eNew York lidubule umfana omhlophe enxibe hoody waza wafunyaniswa enetyala kuzo zonke izityholo ngokupheleleyo. Bekukho ayikho imidiya kazwelonke ebonisa up, akukho bathiyelayo uhlanga abamhlophe ubiza ngenxa yoqhankqalazo. Eli bali iya kwahluka ngokupheleleyo ukuba uMartin ukuba bahlasela Zimmerman ndize inkxaso abaninzi izimvo zakho kodwa Martin yesibini wagqiba kwelokuba uza kukwenza okubi ku Zimmerman yabetha intloko yakhe ecaleni kwaye Babesinqinda ubuso bakhe, wamisa wazenza ukuba shot. Period.. ekupheleni kwebali… zilahle ugqatso kwaye leyo izibakala plain kunye elula.
Wowu. Akukho nto kusekho ngobuhlanga embi kweli lizwe. Yeyona ngaphezu ezicacileyo enoba oko Ndakhe ndathi okanye indlela Ndakhe waveza ngokwam, yanelani ukuba iimeko indlela yam kunye neemvakalelo zam. Naxa sekuthethiwe oku, Ubulonwabele ixesha lakho umthandazo kwaye ubomi elikhulu. ndiyathemba ke ukuba ndokubona kwelinye icala.
Nicole • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:24 mna • impendulo
Ndivumelana nokufezekiswa ukulingana nokuchaza zonke sikweni zentlalo. nokuba, kwakukho ezirekhodiweyo ekuqaleni apho wasebenzisa sophawu ngokobuhlanga yaye unembali kubizwe amakhwenkwe amnyama ebumelwaneni. Uhlanga isenokungabi yinto kuphela kodwa ke.
jonathansampson • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:24 mna • impendulo
Nicole, UGeorge wambiza kuye “qhubeleka,” kunye a “f * cking punk.” Ubungqina kuphela naziphi slurs uhlanga beza xa Jeantel wathabatha ukuma wangqina ukuba ngoxa phezu efowunini Trayvon, Trayvon ebizwa George a “Zezinambuzane esile sibange,” yaye kamva a “kongga”.
George wafundiswa (emibini ubuncinane) abantwana abamnyama, wathatha intombi omnyama ococek, aze nenkxaso abamnyama kwindawo yakhe kwindima yakhe qela. Kwakungekho ngenene akukho bungqina ukuba Trayvon waba profiled ngokobuhlanga, okanye uGeorge ngokobuhlanga.
pepjrp • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:25 mna • impendulo
umsebenzi omkhulu njengokuba nazi izinto zakho. embi Too kukho kuphela 1 yezigidi abantu abamnyama phaya ukufundisa inyaniso kulo mbandela ngathi wenza kunye Bean and Nicole. Amazing abaninzi bafuna njani ukuze bakholwe uhlanga intiyo kwaye alaqhenqetha oku ngokwaneleyo.
Iimbotyi • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:25 mna • impendulo
Hmm.. Ndicinga ukuba “coon” hayi goon. Ukuba siphelise lobuhlanga.
Yintoni le nto ngoku kunjalo? Ngaba thina sonke ukulwa nje umbono wethu kuphela kodwa kwakhona?? I Kusafuneka sibone nabani na kule into forum exchange olunentsingiselo.
Andisokuze ukuqonda oku.. siya ebekumele ukuba ibandla.
jonathansampson • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:25 mna • impendulo
Le mpikiswano phakathi coon kunye goon - umahluko c kunye g. umhlobo kaGeorge ngayo yiminyaka eyishumi (and black, ukuba kubalulekile) ucinga lo gama wasebenzisa “qhubeleka,” echaza akazange nabani na ongaphantsi weva ngaphezu 40 zabo okanye 50 isenzi “coon” njenge sophawu lobuhlanga. I sikwazi ndikuvile coon esetyenziswa njenge derogative; Ndikhe kuphela okhe weva ukuba isetyenziswe njengesingqiniso ku raccoons.
Xa uhlolisisa le neklip enye ingacaci ezirekhodiweyo ekukhanyeni yonke enye into, iyavakala ngakumbi ukuba uthe “qhubeleka”. Emveni kwakho konke, Joe Oliver (umhlobo kaGeorge abamnyama) wathi e leminyaka akazange wabona nantoni zibonisa waseGeorge ngokobuhlanga. George wathabatha intombazana omnyama ococek, baza bafundiswa abantwana abamnyama. Akukho nto ebonisa ukuba ujonga nabani na njengokuba ngaphantsi kwe ke ngenxa yabo yebala.
Le mpikiswano kubalulekile kuba ibandla wenziwe zonke iintlobo ezahlukeneyo zabantu, emnyama nemhlophe. Loo ibali iintlekele ezinjengezi oku kungabangela iyantlukwano enkulu emzimbeni ebonakalayo, kwaye ngenxa yoko kufanele ukuba sonke sibe nomdla ukusebenza ngaphandle inyaniso, ngokusekelwe ngesizathu kunye nobungqina, ukuze baphephe imiba okungeyomfuneko emzimbeni.
Hayi, wathi ke fu **** g lokulayita. Google it. Mamela zomsindo. I-FBI lathi oko eyayithethwa. Kwakungekho slurs ngokobuhlanga ngaphandle ngu Martin.
Antoine Mason • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:25 mna • impendulo
Unayo womsindo apho Trayvon uthe into ngokobuhlanga? I Singathanda ukuva oko.
pepjrp • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:26 mna • impendulo
Ngoko ke wabiza uRakeli Jeantel ulixoki? Okanye uphose ubungqina kwakhe?
Iimbotyi • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:26 mna • impendulo
Mhlawumbi akazange athi ngoko a term lobuhlanga. Andazi ukuba yintoni engqondweni yakhe, kodwa mna andicingi Zimmerman waba ngokobuhlanga. Wenza ke “iprofayile ngokobuhlanga” Trayvon. Kwaye loo nto ebuhlungu kukodwa ngenxa yezizathu ezininzi…
Ngaloo ndlela, kufuneka baxoxe…1. Sazi njani ukujongana amazinga zolwaphulo-mthetho eziphezulu kakhulu ekuhlaleni abamnyama? Ngaba abantu ukuba wenze nantoni na malunga nale njengoko abaninzi bathi alo a “mnyama” inkinga? 2. njani siyeke pigeonholing abantu iingcinga ezithile ngokusekelwe umbala? Ngaba eendaba? Kuthiwani kwezi nkcukacha-manani, yintoni na le nto athetha? 3. Sinokuqiniseka njani kumanyana ngakumbi? Bona abanye ngalinye ngayo? Mhlawumbi kufuneka iiforam ezininzi apho abantu nokuthetha ngokubehleleyo?
Ndifuna ukuba loo ngxoxo, kodwa silwa ngasinye omnye akayi ukunceda. Yintoni esiyifundayo ngezithuko zento? Le umkhumbuza-1960. Le bebonisa phandle omnyama kumazinga ulwaphulo-mthetho omnyama njengoko abanye sesa ekugwetyelweni.. Kutheni abantu abenza lo? Nje ukuba buhlungu omnye komnye?
njengoko amaKristu, sinokuqiniseka njani umzekelo beze ngayo kunye kwiimeko ezinzima ezifana nale? Singenza njani umzekelo kaYesu ukuze ungakhethi isibi eso esweni umzalwana wethu- kodwa sihlolisise thina ucele ukuba senza konke okusemandleni ukuze eli hlabathi libe yindawo engcono?
pepjrp • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:27 mna • impendulo
akulunganga UNicole… amanga ngakumbi ezingachanekanga yi hustlers ubuhlanga kunye namajelo eendaba zobunene. Kuya kuthatha ixesha elide olungafanelekanga bonke ubuxoki abamnyama baninzi kakhulu abantu ngakumbi happy ukukholelwa. Nicole, awazi izibakala. Nceda ufunde kubo.
Nathanial Poling • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:27 mna • impendulo
Nicole, ngaba uye waphulaphula kwecala? Le slurs ngokobuhlanga kuphela ephuma emlonyeni Martin njengoko umhlobo wakhe esibe sithetha naye efowunini.
lewrites • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:27 mna • impendulo
okokuqala off, I mean ayengenandelelo…Mna white / lweenkobe American. Kodwa endakha kuphela weva “qhubeleka” ebhekisele kubantu abamnyama. Kwaye kangangoko oko Jonathan Thompson uthi…Ndakhe ndeva abantu abaziwayo abathi mentor abantwana abamnyama kuba befuna ukuba “civilize” okanye nje kuba befuna ukuba enze isenzo sabo ezilungileyo imini ngokunceda olunye uhlanga.
Andenzi esithi uMartin omawuyithethe oko wathi yena. Makube lee oko. Ndicinga ukuba omabini la macala wenza into embi kulo mzekelo kwaye Andikholwa ukuba uza kuyazi inyaniso. Emveni kwakho konke, Baninzi abantu baye bakwazi ukufumana ukubaleka lokubulala ngokwenza bonke bakholwe ibali labo…kukho ityala likarhulumente lam kwikhaya apho a guy yabulala intombazana eselula baza abantu ukuba alale yena umnike i ubungqina bokuba kwenye indawo kommangalelwa ngexesha lesenzo esithile. Ekugqibeleni abantu baphuma kwaye uxelele inyaniso, kodwa mna besithi nje nje kuba msulwa abantu bathi yonke lento ngaye akuthethi ukuba ukuba akukho ukungathembeki. Mna Kwakhona esithi ukuba ukungathembeki, mhlawumbi.
Elinye ityala likarhulumente ikhaya lam ababandakanyekayo ngumdlali webhola ebethwa ukufa guys ezimbini ukusuka kwesinye isikolo kule nkomfa. Nangona akhawunti ubungqina amehlo, enye kula madoda mabini wehla scott ezamahala, omnye unako ukufumana into nesicelo sokuba lokubulala. Abantu ubungqina la madoda mabini abaselula ngumtya Babesinqinda lo guy ngoxa ukuba umva wajika wabuyela, baza bambetha til waye emhlabeni, unconscious, ke ahlukana xa beva kwakhala. Ke kaloku omnye wabo uyakwazi ukuba bahambe.
Kukho imingxunya enkulu kwinkqubo yezomthetho, kuba nje umntu msulwa akuthethi ukuba msulwa. Kwelinye icala, Baninzi abantu abathi ubungqina bokuba unetyala ngisho nokubulawa kamva ukuba afumaneka ukuba msulwa. abantu ababini kuphela sazi ukuba kwenzeka ntoni ngobo busuku
jonathansampson • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:28 mna • impendulo
Andigqithanga wakha weva “qhubeleka” isetyenziswe njengendawo sophawu lobuhlanga kubantu abamnyama. waya nje emva ukukhangela Urban Dictionary kwaye akubonakali ukukhankanya uhlanga kuyo nayiphi na na iinkcazelo ayo aphezulu.
A “Qhubeleka” ongowona umntu osisidenge,, okanye enkulu. iinkokeli mafia abathume zabo “goons” ukuba benze ngokomlomo wabo. Nje ukuba ngokucokisekileyo ndiya kuhlolwe etymology, kwaye kakhulu ayithethi dwelisa naziphi na imibutho ngokobuhlanga. Iimpawu ukuba oomatiloshe, abantu kwimisipha, yaye kamva embalini ku neenjubaqa.
Ke ngoko izimvo zakho malunga iingcebiso abantwana abamnyama kuba ufuna “civilize nabo,” asikwazi siphethe abantu iinjongo ngokusekelwe izigwebo yethu esinayo kubo - nto nje not fair. Ukuba George wafundiswa abantwana abamnyama, yaye nalinye abazidlayo ezithile isibonelelo iyelenqe phezu kwakhe, Kufuneka ukucinga ukuba ngenxa yokuba ekhathalela ngokwenene ngabo.
umgca Ezantsi kwimeko Zimmerman kukuba ubungqina obubonisa UGeorge phansi. knuckles Travyon ibonisa ukuba Ukubetha umntu. intloko kaGeorge kwafana kakubi kwaye wabethwa. Waba op ngaphambi kokuba igqwetha, aze acele amapolisa ukuba badlale ntoni. Abacuphi bathatha ibali lakhe phezu yaye phezu, izihlandlo ezininzi ezahlukeneyo, bejonge iimpawu inkohliso kunye ababufumananga. Xa zonke ungayilinganisi kubonakala ukuba UGeorge kukoyika ububi okukhulu ngokomzimba, okanye ukufa. Asinayo isiseko exela ngenye.
Ndiyavuma ukuba abantu benze izinto ezoyikekayo, bangabhaqwa, ngoxa abanye abantu ngokungekho Babesoblwaya ngenxa yobubi abazange benze. Andiqondi ukuba yangaphambili isebenza ku George; hayi esekelwe kubungqina. Kodwa mna ndicinga le yokugqibela wenza njengoko ngoku ukuba ukuzimela ukuze akhusele yena nentsapho yakhe ngoxa ihlabathi iipeyinti ibe enobuhlanga - abamhlophe ezibangela abamnyama zonke ukuba uyamthanda ukufa.
Kukho mingxuma kwinkqubo; Ngeke siphikisane ukuba. Kodwa thina nalinye njengesibhekisa ngokuqgibeleleyo naliphi na isiphumo ngenxa yezo mingxuma – hayi ngaphandle ethile uhlobo lobungqina, okanye amahle. Yonke into kulo mzekelo, yonke i data zikhe ngokusebenzisa kweenyanga ukuzihlola, ucebisa ukuba umntu George iye unyanisekile ngayo ngobo busuku. ubungqina Eye-lingqina exhasa indaba yakhe. ubungqina indlebe-lingqina exhasa indaba yakhe. Ezi nyaniso misalign ngokwabo nebali wakhe. Kufanele si, ngenxa yokuhlonipha ngesizathu, kela nayiphi na ukuqashisela olunye nomgwebo uThixo.
Ukuba ufuna ukubona ityala ngokucacileyo kuxheliweyo elimsulwa, khangela ngakumbi kwe John Spooner. Indoda yakhe 70 wadubula umntwana oselula abamnyama kabini emini ebanzi kunyaka ophelileyo. Ukwazi “ilungelo ezimhlophe” ngeke amkhusele, ke isilonda up omela ukungaphili. Oko kuya kuba yindawo elungileyo ekhangela ubuhlanga – ulingo Zimmerman ayikho. Ukuba ukukhanya-olukhanyayo akavumeli ufumana kude nokubulala.
lewrites • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:28 mna • impendulo
Ulungile, asikwazi siphethe nantoni, I nakanjani uyavumelana. Yintoni ndizama ukwenza ukuba ummeli play umtyholi. Ndiyazi ukuba ukukhanya olukhanyayo akuthethi ukuze kude nokubulala (kwimeko lo mfo ngokubulala intombazana, guy zazimhlophe, kwimeko umdlali webhola, onke amaqela abamnyama).
Le nto ke ayithethi ngaphandle ngokupheleleyo le bhokisi ukuba bacinge…kuhle…ngaphandle kwe bhokisi. Urban Dictionary Andazi ngenene uya kuba ingcaciso eninzi kuba lukhulu koko ndive ngeenxa ubomi apho yahlukile kwindlela ukuba ibekwe phezulu kweso siza. Mhlawumbi ummandla wam unikela amagama ezahlukeneyo iintsingiselo ezahlukeneyo. Kanye ubhontsi phezulu kwiindawo ezithile kuyalingana ngomnwe eliphakathi.
Mna waxhatshazwa ngokwesini xa itakane ngumntu ekungekho bani wakha wasola kuyenza into enjalo. A Irekhodi track olungileyo, abazali emihle, ezibonakala umntu olungileyo. Wonke kucingelwa kangangoko…kunene? Ukuba umntu muhle, njani na ukuba enze into enjalo kum?
Kwanele ukuthi, kulo mzekelo lunyusa amanqaku ingxoxo elungileyo, kungakhathaliseki nokuba okanye hayi ubuhlanga yaba nezizathu. yeah, amajelo eendaba wondla kuyo, kwaye okukruqulayo ukuba benza njalo. I kuyakhathaza media kwikholeji, siza bafundiswa ukuba basi-, kodwa abanye abantu bathengisa ukuba ombutho ukwenza ibali ngcono, akulunganga.
Le nto Ndithandazela zombini iintsapho, I awuyekele nguThixo, ukuba abe ngumgwebi wokugqibela, ngenxa yokuba ekugqibeleni, Nguye kuphela na indawo ukwenza njalo. Ndiyaxolisa ukuba ndabahlalisa na nantlonelo, Bengifuna namnye.
pepjrp • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:28 mna • impendulo
Goon akukho sophawu ngokobuhlanga yi nayiphina ingcinga. Zonke apha kuwe entloko.
Antoine Mason • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:28 mna • impendulo
Wow wena ngokobuhlanga ngokwenene.
pepjrp • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:30 mna • impendulo
Amajelo ongakhathaliyo ibali lakho, kuba aningabo Black. Abamhlophe Hispanics abakulo kwinwele-ezingaphaya lwenkokheli ubuhlanga ezifana Jackson Sharptin.
Wena kanye ilungile njengokuba lo mbhali ngempazamo ukuzisa ngokobuhlanga xa wayesithi Zimmerman agciniweyo uMartin kwaye ngobulumko wanika izibakala wasala. intiyo yobuhlanga uyakwazi ukukhuthaza xa abantu ingxelo ikwenze. Washiya kwakhona ngaphandle okanye akazi ukuba uMartin abahambanga sokuhamba xa uhamba ekhaya, Wanqumla ngokusebenzisa iiyadi nje iinyawo ezimbalwa ezindlwini neengcango ukuzisa urhano phezu ngokwakhe. Zimmerman ingxelo ukuba ubomi kule 911 umqhubi njengoko ahamba amehlo Martin. Kanye njengoko ingxelo live ukuba uMartin engasekho yena waphulukana kuye. Kwakutheni ukuze uMartin ukubuya njengoko kwemizuzu yaye kutheni le nto yonke ebalulekileyo oshiywe yi networks and izihlwele? Inyaniso watshoyo amaxesha amaninzi, kodwa washiya ngaphandle yi izihlwele abamnyama kwaye ke, i hustlers uhlanga ezifana Jackson Sharptin.
BQPhotography • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:30 mna • impendulo
Lena Yinyaniso! Ndiyathemba sithandaza nga bathungelane kule kwaye
gdoggydog05 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:31 mna • impendulo
le ngxaki, nayo, ukuba akukho namnye uya bayavuma ukuba kwakhona esilwela ukuba abantu ukukhetha kulo mzekelo njengalowo kubalulekile ukuba wonke umntu lumiselwe kwi, kwaye uluvo, ngokwesiseko ngokobuhlanga. i kakhulu iminkqangiyelo bakho ngaphezu, njengoko oku yenye yezithuba ngaphantsi ningazi ukuba ndiyifundile, kodwa mna emhlophe 26 konyaka ubudala ukusuka suborbs kananjalo Ebindekile yile meko. Kuba nje iiprofayili ongqina ubuhlanga usaphila. Isibakala sokuba eli tyala yaziwa zonke lobuhlanga uhlobo yayo became. Sithetha ngalo kule meko ngenxa yokuba inkwenkwe black ufile. Siye babonwa trajedy emnyama (mhlawumbi kwenzeka rhoqo, kwaye obuhlungu, kodwa ingongoma yam apha) ukuba kubaluleke ngakumbi kunabo bonke abanye amawaka ezibuhlungu yonke imihla. Kukho zonke iintlobo trajedies zabantu abamnyama ngokubulala abantu abamhlophe kunye baze ngokobuhlanga, ukuba akukho ingxelo kwaye okuphekwe phezu, Le nto, nekungoku ingxamele ukuba into eqhelekileyo. Kulo mboniso Wisconsin, Ndiyakholwa ukuba, kwiminyaka embalwa edlulileyo flash ihlokondiba elenziwe elivisayo Afrika American bashiya kuhlaselo efanelekileyo kwaye siququzelelwa nxamnye abamhlophe-kuphela, kwezinye iimeko ke ngenqindi abantu abadala ebusweni, wangena amakhaya zasekuhlaleni kunye namashishini kunye amanani yeba ukoyikiswa ngamandla, kwaye kungekho ukusokola. Ngaba Ucinga ukuba iqela elivisayo ezimhlophe ezithagethiweyo abamnyama? Amajelo ukhetha, kwaye xa ukhetha, xa unikel 'ingqalelo kuphela kwi “kuphela umntu omnyama ukuqonda” icala le meko, ukuba yintlekele emnyama yeyona ibalulekileyo, nangoku, kanti hispanics, IsiTshayina, abamhlophe, bafela ngendlela efanayo. Eli tyala kunokuba ifuzisela oluthile abamnyama “umzabalazo,” ndiyaqonda ukuba. Kodwa ayikho indlela yokusombulula ngayo. Ndiyazi ukuba ubuso ukuba lo yandisa nje likhona phakathi kwethu. Wena ndinixelele nam njengendoda emhlophe baqonde ukuba mna ngayo kufakwa njani, kodwa mna profiled zonke iindlela ezifanayo, njengoko umfana. Ndiyavuma, kokuba moreso ngesikhumba olunombala amnyama, kodwa “abatsha” inento yokwenza nayo. Uthi i asoze ukuqonda, kodwa mhlawumbi nawe awusoze uzakuyiqonda wenza ndizive ngathi xa bonke abazalwana bam abantsundu christian zijolise martin, kwaye musa nokuba bavume ukuba kuphosakele kwi ndawo yokuqala ukukhetha le trajedy ebaluleke ngakumbi lawo makhulu trajedys efanayo ezenzeka mihla le. Ndiyakholwa ukuba isono. Nantso i uluvo. Ukuba uhlobo oluthile engqondweni esonakeleyo emva kwayo nayiphi na imeko sokukhetha olunye uhlanga ngaphezu komnye. Kwaye ndiyakholwa ” ukuba ndingabanga izihlangu zam” banzi kuphela ukuba likhona phakathi iintlanga i ingxelo ongenabulungisa. Ngaba uyazi ukuba kunjani ukuba nam aye kwikholeji, kuba andinaso 8 grand ngokubekwa emhlabeni, ebukele abantu abamnyama kunye amabakala ezifanayo ufumana spot yam kunye yokufunda? Kungenzeka ntoni ukuba. Indawo My, ukuba naliphi na ixesha nithi “awazi ukuba kunjani ukuba mnyama,” ukuba ungenzi nantoni na onemveliso, kuba akasoze umbala wakho. Ndikholelwa ukuba abamnyama kanye njengokuba imfama kwimiba ezibangela ukuhlukana obukhulu phakathi kweentlanga. Amerika Afrika ubukele le nto Travon Martin nokucinga ngenye into, ngexesha ngabaMhlophe ezibuza into eyahlukileyo ngokupheleleyo. “Ngaba nje yaye kulungile ukuba eli tyala ku hlaseriwa ibalulekile, nosaziwayo, kwaye mkhulu kunabo bonke abanye, ngokwesiseko ngokobuhlanga?” Mna ke ukubona omnye African American umKristu ukubalula le. Silibale ukuba Inyaniso ukuba ningazi. kusenokuba kukho abathile inyaniso abamnyama adwelisiweyo, kodwa ukhetha ukubeka ityala phezu umboniso esekelwe kubuhlanga engalunganga, nangokungabahloniphi kwezinye iintlanga ukuba ubulewe nje travon kwaba.
Deborah Bilbo-nembila • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:47 mna • impendulo
Gdoggy, into ebeniyicelile iyavakala. Mna abamnyama kunye unina woonyana ababini ndaphakamisa ukubona abantu isimilo babo nobubele hayi ibala lomntu. Oonyana bam yomhla amantombazana amhlophe, girls Hawaii, etc. kwaye Ndisoloko wabaxelela andinangxaki nayo kuba bonke zidalwe mnye uThixo nje kwaye sifanelekile. Man wadala le yantlukwano kudala kwiNqaba yaseBhabheli. Oku kuthiwa, kwi kwecala. Ewe, Kwimeko Trayvon kaThixo lwavela kumabonwakude yaye yaba akukhethayo indibanisela yabantu zokunyanzelisa abo barhola ingqalelo kwityala. Oko kuthethwa ngabantu abamnyama ningaqondi kukuba abantu abamnyama ngokobuhlanga kakhulu. Kufuneka senze umgudu ukuze sityhole yonke ngokobuhlanga. Asinto uhlanga yedwa, ukuba imalunga George Zimmerman ingamphulaphuli amapolisa xa kuye “Bangalandeli.” Ke kaloku ezinye izigqibo ezimbi eziye elithathwe ngokungathobeli kanye umthetho wamkhusela ekugqibeleni kunye Yima umyalelo wakho Ground. Ndiziva uvelwano enkulu intsapho Trayvon kaThixo, ingakumbi umama wakhe ngenxa yokuba wayeyinkwenkwe omnyama kodwa ngenxa yokuba KWABANTWANA lukamama! Ulwaphulo-mthetho engalunganga enoba owenza kodwa eneneni ke wenza ulwaphulo-mthetho singahambi ecaleni kwendlela? Zimmerman ngokukhawuleza kakhulu ukwenza, ukuba kwakufanele alindele ixesha elidana ukubona iziganeko Trayvon ngayo, ukuba wayeza ukuzijonga window okanye uzame ukuba waphule ucango phambi ngokumlandela. Esiphelo sesokuba GEORGE ZIMMERMAN umyalelo DIRECT umthetho! Yenza izibalo.
gdoggydog05 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:47 mna • impendulo
enkosi ekuqondeni izimvo zam. ukuva abantu abamnyama njengawe, ntoni ndinike ithemba. i uyavumelana george zimmerman wayesenza ngobudenge. ukuba kwakufanele alindele ukuba adubule, kungakhathaliseki ukuba nomsindo indlela kukuba ebumelwaneni lwaya igqojozwe….Ewe ulungile. akukho kangako, ngokuba bengawuthobeli umyalelo kuphela, i dont ucinga ukuba aye entolongweni ubomi okanye icala lokubulala. simele sijonge isiganeko ngamnye. akunyanzelekanga ukuba kwenzeka ntoni. mandikunike umzekelo. imizekelo ok ezimbini i believe lwabaligcinayo isiko engqondweni. kwenzeka enye, a nasemathaleni indoda…. uyazi embi yayo kodwa ngenxa yobuthathaka, ngoxa uqhuba phantsi endleleni alahle milkshake yakhe McDonalds phandle ngefestile….. emveno kwexesha, umntu ebona milshake, ucinga yayo rabitt bunny (i uyazi le mizekelo etyeni, ndinyamezele) kunye swerves, ibhulorho imoto lufe. ntoni na umntu enetyala? lokubulala? …. akukho yena unetyala ukungcolisa. sonke isono sikhokelela ukubulala. isono isizathu esenza ukuba uKrestu ukuba afe. Kodwa apha emhlabeni, Sigwetywa ngokuvumelana ulwaphulo-mthetho, yokugcina ucwangco. Kulungile, nantsi enye meko efanayo apho isenzo engaphantsi ebangela ngumbala ezinkulu. Umntu olivila ngubani na ukusebenza nzima ngokuba ugxininisa ngexesha imisebenzi ebalulekileyo efana wakhangela emva kwakhe 2 nonyaka ubudala…. na usana lwakhe emotweni kunye ibaleka imoto kunye ucango igaraji phantsi… Ilibale cell phone yakhe endlwini….. a call iza ngenxa, ichithela phezu ngeyure kwi call kwaye uyaphuma kwaye umntwana wakhe ufile. Yintoni na yena unetyala? ukonqena nje nabangekhoyo esikolweni kwentliziyo? kakuhle, umntwana wakhe akakwazi lokuzithethelela. Engumntwana. Wayesazi waba uxanduva kunye isenzo sakhe nankathalo wabangela ukufa kwakhe. Le lokubulala. Umntwana kwakungekho inxaxheba it.Only yena unetyala. Kulungile, zimmerman kuba netyala kwimiqobo kokusesikweni mhlawumbi ezinye izinto …. kodwa, ukuba yalo travon wajika phezu kwakhe yaye ambetha, andule ke yamdubula. George Zimmerman unetyala ukungathobeli amapolisa. Kodwa kukho elinye iqela yokuzikhethela ababandakanyekayo. Ukuba Travon waba, bathi, 3 ukukhetha….. run (waphants ngokuqinisekileyo ngokukhawuleza….. ukuya ngaphakathi….. okanye mhlawumbi ibe nomsindo yaye sigqale george ukuba kutheni ke hassling kuye. Andazi ukuba wenza ntoni. Nantso indawo. Ukuba wayezama ukubaleka kwaye kuzingelwa phantsi zimmerman, ukubulawa kwayo. Kodwa ukuba travon, ngokuzidla, wayefuna ukuba babe (i ukwazi ukuqonda le….mandulo, oku bekuya kuba mna )…. ke ngelo xesha, Kwakhona wenza isigqibo yokuzikhethela ukuba badlale kwi iziphumo zokugqibela. Le ngxaki ke dont siyazi nguwuphi kwabo ivelile. Ukuba uqale ukubiza abantu ngokusekelwe neziphumo yama- ubuxoki zethu, nazo zonke izono zethu….i yintoni ocinga ukuba uya kufumanisa ukuba kufuneka onke atshixelwe kude. George zzimmerman unetyala ukuvalela kunye namapolisa….kwaye sibe netyala ngaphezu, kodwa ngaphandle kokuba kukho, i nje abazi ukuba.
Iimbotyi • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:47 mna • impendulo
Zimmerman bengazivumeli umthetho nto ndicinga yinto ngokwenene malunga. Mna abamnyama kodwa inkxaso wam isekelwe uhlanga lonke. Ukuba izizwe ziye bajika bendingaziva 100% ngqo ngendlela efanayo. Umntu umpu xa kuthelekiswa itakane.
Ndicinga ukuba xa wena unguye umdali sisizuza okanye imeko yingozi.. wena lokubulala kumlinganiselo othile… Ndinqwenela nje FL oluthile umthetho akwazi kumvelela yena, ngokuba Z waphuma waya kufuna ukuba inkathazo ubusuku.
Ndiyakholelwa ngokwenene ukuba bavalelwe yeza Trayvon, Trayon nakuba kabi, ngebesaphila nanamhlanje. Ndiyaqonda ukuba kutheni ndiyacaphuka kangaka. Ndibona nje le meko nje kid waphulukana nobomi bakhe ukubopheleleka ezifanayo, ukuba ngaphezulu, uxanduva njengendoda.
pepjrp • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:47 mna • impendulo
Akwazi izibakala mhlawumbi bean. Fumana inyaniso kwaye mhlawumbi uya kuziva bhetele.
rita • EtiMnga 9, 2014 ngexesha 2:24 pm •
WO, Vala onke youtubes leyo kakhulu ofniesfve ndakha ndayibona. She is nje ngebala, njengoko Sharpton no Jackson. Mna andizange ziye embarassed ezweni lam ukususela loo SOB omnyama iphumelele phezu uhlanga egwenxa!Xa unxiba ezo leggings off AF1 ndiye f'king amantongomane.
Akazange kuwugqitha! Fumana izibakala. Akwazi kuzo zonke.
Nathanial Poling • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:48 mna • impendulo
Bathi ke musa ukuba bamlandele… ukuthi awubonakali ukuba umyalelo ngqo. Ngaphezu, umqhubi ku 9-1-1 ayinayo unegunya. Kwaba lento umfana kwafuneka afe, kodwa zazisa kakuhle abafana benu abake bahlasela uMnu. Zimmerman yabetha intloko yakhe ecaleni waphuka impumlo yakhe. Wayeza kuba babacela ukuba ngoobani, bakwazi ukuba Waphendula ngembeko yaye kutheni bephelelwa phakathi kwezindlu ekuhlaleni esivath ubomi buyaqhubeka.
pepjrp • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:48 mna • impendulo
Bakho lady nice Debhora, kodwa azilunganga njengoko kunokuba xa uthe malunga George Zimmerman ingamphulaphuli amapolisa xa kuye “Bangalandeli.” Akazange kuwugqitha nabani. Mamela umsindo ku Youtube! Wathi Kulungile wahamba wabuyela ilori yakhe. Yena waphuma umoya xa ezilandelayo Martin, kodwa emveni wathi Kulungile, i ukuphefumla enzima wayeka njengoko Waphendula ezimbalwa imibuzo malunga idilesi namarhataa kwaye ngoko ebeke njenge inani imizuzu babehambe yaye uthi ngokucacileyo ukuba akazi apho uMartin waya. UMartin waba kuphela 50 ukusuka ekhaya lakhe, kodwa yena wabuyela kwi ndawo. izimvo yakho Undoqo GEORGE ZIMMERMAN umyalelo DIRECT nokubekwa UMTHETHO nonfactual ngokupheleleyo kwaye awubonakali ngathi ngohlobo lomntu ofuna ukuba ukusasaza ubuxoki. Wena uxokisiwe njengoko 1,000 kwaye 1000 ngayo kwabanye! Mamela uze uphande yaye uya kufumanisa ukuba mna ndinixelela inyaniso! kwaye ngokomthetho, i 911 umqhubi wathi Zimmerman “Akuyomfuneko ukuba siyenze ukuba”. Zimmerman uthe Kulungile kwaye uyakuva ukuba wayeka isebenza. Get izibakala abakholelwa ubuxoki ngokobuhlanga.
Andrew Keeter • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:49 mna • impendulo
Uhambo I kufuneka ukuba
uyavumelana nayo gdoggydog05
ngokuba echaza zihambe kakuhle kakhulu.
Le ngxabano phakathi Zimmermann kunye noMartin into leyo
kwenzeka mihla le kweli lizwe kunye kangangoko yintlekele njengoko ngayo
ukubona umfana wabulala, ungaphezulu ngenxa yentlekele ukubona eendaba siyayijika lento ibe li
a kwetyala ngokobuhlanga luqhutywa akukho nemiphumo emihle ukuba Zimmermann wafunyaniswa
necala. Ngobo busuku Trayvon wadutyulwa
kwakungekho iiprofayili ngokobuhlanga ngu Zimmermann ukuba kunokuveliswa ubungqina. Abezindaba kanye kaJese Jackon, Al
Sharpton, kuMongameli Obama, The New Black Panther Party kunye nezinye ixesha elikhulu
nosaziwayo Afrika American wema ukuba banike izimvo zabo bacinga ntoni
Kwathi, xa kungekho namnye ngaphandle Trayvon Martin and George Zimmermann wayesazi ngokwenene into
kwenzeka. Ezi zenzo wadala uqhwithela
zobundlobongela intetho ngobuhlanga ezingenakulinganiswa ukuba ukumiswa. Ndicinga ukuba sifanele sithandaze ukuba macala omabini le
ulingo kwaye ucele ukuba uThixo makangenelele kukhuza abo bamphoxayo, angered, kwaye
udidekile ngale meko lonke.
USathana ukulawula eendaba kweli lizwe yaye wenza into ayifunayo
nayo. Uva kuphela malunga amabali
ukuba uza kufumana ingqalelo kakhulu ke ngoko ezi zikhululo eendaba anesizathu sithengise
air time kumashishini ukubonisa iintengiso.
Ndithetha kakhulu ngakumbi Ucinga ukuba njani babathethela ngexesha Loo maxesha ke ngoko
kuthethwe Fox News, CNN, MSNBC kunye nezinye nabanxulumene ukuze amashishini bangamazi
zenze zabo ekuthengiseni iimveliso zazo kuluntu. Oku akuthethi ngokubika iindaba kwi
Ukufa umfana indlela phambi kwexesha yakhe kwaye umntu lowo yamdubula…..nto
ngayo imali yingcambu yazo zonke iintlobo zobubi.
Ezi zikhululo eendaba sele ebonisa eli nomzila elidlulileyo ezintathu
iiveki nokuqokelela imali ngakumbi uthando nje. I bet ukuba nethemba ulingo ukuya ku elide
ukuze akwazi ukugcina amalahle kwi yenzuzo.
Yinto ugula kangakanani kangaka ebomini bethu sipha TV, Ndiwugcine esinjengaso
ongumfundisi lethu xa kufuneka zijolise kuzo uYesu. Wena nayo ingoma ethetha ekuthatheni
amehlo akho kuwe uze ubeke phezu kwakhe.
Kufuneka sithathe amehlo ethu umabonwakude kugxininisa kuluntu lwethu kunye namabandla. Ukuba siphila California, Virginia, Inew york,
Montana, Texas, etc… asikwazi kutshintsha okwenzekileyo eFlorida apho Trayvon
wadutyulwa, kodwa unako ukutshintsha indlela esebenza noluntu lwethu. Ukuba sifundise abantwana bethu ngoThixo, uYesu, kwaye
uMoya Oyingcwele. Singakhetha umphakathi
iinkokeli, amagosa karhulumente, izinduna amapolisa, oosodolophu, etc ukuba ume lobuKristu yethu
zentsulungeko kwaye abayeki phantsi xa sisongelwa ngabo nesono
zizigquma phezu kwamehlo abo. Asikwazi ukugcina
ugxininisa into eyenzekayo iiyure kude xa uluntu zethu ziyasokola
kwimiba efanayo. Ndingu emhlophe 28
oyindoda oye wakhonza eli lizwe lwa Iraq emfazweni. I athunyelwe kwilizwe apho
ize, wabona zonke izinto ezininzi I usathabatha lula namhlanje ukuba la
abantu kunika i ingalo okanye umlenze ukuba.
Oko kwandenza ndaqonda kukho iingxaki ezinkulu kakhulu kweli hlabathi ngaphezu
Ukuxambulisana minor siqhubeka ukwenza. uSathana
ufuna rile abantu kwaye ufumane kubo konke ukuphixanisa phezu ubundlobongela ngobuhlanga. Wathi nomnye oko nemigubasi yabo, kodwa ndiza
athi kunzima kakhulu. Ekuphela Umbala kufuneka sibe
ebandakanyekayo umbala obomvu-emele igazi likaYesu. Ndiziva ngokwenene intlungu wakho ukuba ngokobuhlanga
iiprofayili kuba xa ndandiselula babenziwe yam yaye namhlanje ndibona
kuyo. Gdoggydog05 wenza ingongoma olukhulu malunga
abantwana abamhlophe abangakwaziyo ukuya eyunivesithi ngenxa yokuba abanayo amawaka
dollar phantsi ukuba avuthele, kodwa nabantwana bezinye iintlanga bayakwazi ukufumana imali
ukusuka kurhulumente ukuya abancede ngaphandle.
into efanayo uya kuba imisebenzi ekutyeni fast okanye amashishini enjalo. Mna profiled ngokobuhlanga xa ndandiselula
uzama ukufumana umsebenzi kwi McDonalds kunye nabantwana ababini uhlanga ke mna
wafumana umsebenzi yaye andizange. Akulunganga,
kodwa ubomi meko ayinabo ubulungisa maxa wambi kwaye ubonisa kanye ukuba uSathana
uya khona wena. Ukuba uThixo unako ukuxolela bonke
isono senu kutheni ibala kuba umba naye? iiprofayili Ubuhlanga na eli hlabathi, uSathana
umlawuli weli hlabathi de uYesu uza emva ndibuthabathe umva. Kude kube ngoko ke kufuneka siphila kweli hlabathi, kodwa thina
musa ukuba baphile kweli hlabathi. thina
ukuphila ngenxa yezinto ngaphezulu eli hlabathi ngokuzibeka ngaphezu ngokobuhlanga. Sonke ziye zaya imizabalazo. Abanye baye batyhubela imizabalazo ababenaye
zibangelwa ibala lomntu. ezinye
sayihamba imizabalazo kuba indlela umzimba yabo ibukeka. Abanye sayihamba zeCosatu lwangaphakathi
zazibangelwa kwasekuzalweni. Abanye baye benza
nezinto bazive abanakuze bakwazi phezu yaye kwenzeka ntoni kubo bonke aba bantu
xa beza ukwazi uKristu? bonke
ukuba uncedo nemizabalazo yabo. Uza
asivumele ukuba siwele kwaye Yena uya kusikhokela esebenzisa kwemizabalazo. Le Trayvon vs Zimmermann nto kufuneka ukuba
ukumisa ngenxa sigwebo iye yafikelela.
Inkqubo yobulungisa wenze umsebenzi wayo kwaye kufuneka sijonge
izibakala. Ukuba lo mba phakathi ezimbini
abantu umbala ofanayo thina njengesizwe ange zange weva kunye
bewazi okufanayo ekufikelelwe ngaphandle nabani engazi. Kufuneka uyeke sivumele kwabeendaba kunye
nosaziwayo ukulawula iingcinga zethu. ukuba
ukubeka ukholo lwethu umntu ngoko siya sihluleka.
Misa kujoliswe phezu kwabo waza wabeka amehlo akho phezu KUYE.
Shope • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:50 mna • impendulo
Abamhlophe aye ahlasela abantsundu ngaphandle kwesizathu nje. Khumbula i KKK?
Matty • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:51 mna • impendulo
Nangona Ndivumelana ngokupheleleyo yonke into wathi apha, Ndicinga ukuba kubalulekile ukulandela izibakala hayi iimvakalelo zethu kulo mzekelo. kwamapolisa asekuhlaleni kunye FBI sele uqinisekile ukuba ubuhlanga akazange adlale indima kule meko. Bafumanisa akukho bungqina ukuba Zimmerman agciniweyo uMartin esekelwe yohlanga lwakhe. Bafumanisa ubungqina bokuba Zimmerman agciniweyo uMartin ngokusekelwe izinto ezingaqondakaliyo. Zimmerman wasabela kuphela xa ebuzwa ngamapolisa oko uhlanga uMartin waba. Akazange ukubiza up athi ke kulandela umfana omnyama. Andenzi esithi akukhona iiprofayili ngokobuhlanga. Kodwa ke ubungqina ungasivumeli ukuba senze ukuba sizimisele. Kwaye akamane ngokukhetha ukukholelwa ukuba ngokobuhlanga xa kungekho bungqina kuloo nto yenza ityala ngokobuhlanga xa akuyomfuneko ukuba. Race akazange eze kulo eli tyala. Ukuba umtshutshisi yakholwa Zimmerman wayesenza ngenxa yeentshukumisa ngokobuhlanga, musa ukuba ucinga ukuba uza kunyuka? Utshutshiso kwakufuneka ukufumana jurors kwicala labo…yokudweba Zimmerman njenge enobuhlanga bekuya kuba eyona ndlela ilungileyo yokwenza ukuba.
Umba wathetha ngako yokwenene kakhulu futhi sikhulu ugly. Ndicela zikhala nje ukuba kule meko, yokudweba kube njengento calulo xa ubungqina akayixhasi oko kuyingozi kwaye sempilweni.
Samuel Coleman • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:51 mna • impendulo
Ubukele le vidiyo….
Uhambo Ndiyakuthanda kwaye Hlonipha nawe, umculo wakho umyalezo wakho kodwa Ndivumelana ngokupheleleyo Jonathan Sampson ngezantsi….
Mna ndiyavuma ukuba kukho ngokuqinisekileyo ubuhlanga namhlanje kodwa lo mzekelo ukufumana ingqalelo sasazo isipha crap.
Zonke iimeko ukuba Glen Beck wathetha got 000000000 Media ingqalelo…. Ngoba ??/ bec thina sibe ekhululekile non Christian Country lowo undilandelayo uYise uMtyholi…. Kwaye kufuneka uMongameli ngubani onokudlala ikhadi uhlanga ngonaphakade ngomzuzu .. ngoba ? Ukuze ufumane into ayifunayo …. hayi Justice hayi Inyaniso….
Njengoko umntu omhlophe kwabanjwa umzalwana wam umpu kuyo bec yena emhlophe.. njengendoda emhlophe Utata wam nomhlobo wakhe kwikholeji zaye ngaphandle ubungqina waza wafaka isangqa yi nemigulukudu sabaNtsundu bec amakhwenkwe ezimhlophe ayifanelanga ukuba kuloo ndawo wedolophu.. bazalwana bam umhlobo ngompu wazisula baza babandulula.. Utata wam wathetha amazwi uMoya oyiNgcwele, ngokubuza abantu ” Ingaba ulambile” uThixo esazi abangazange bedlile kwiintsuku ezimbalwa kusindiswa nguBawo…….
Akukho mna ndingumntu omnyama kodwa ndiziva ndinolunya Trayvon yaye xa kukho ubuhlanga WOKWENENE…
Ilizwe lethu ehla idreyini.. KwabaseRoma 1. UThixo usinike ukuya engqiqweni engacikidekileyo…. Oko siye sabona nto xa kuthelekiswa noko uza kuza.. Ziphawule wadi bam ukuba Melika usaqhubeka ngendlela yokuba uya kuya kuba mthethweni ukuba ndibe ngumKristu kwaye siya kubulawa ezitratweni..
Dave • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:51 mna • impendulo
Yazisa inqaku, uhambo.
Enye into ndicinga ukuba kuhle ukuba thina njengamaKristu ukuba sihlale sikhumbula kukuba simele uluthiye ubuhlanga / ixesha sikweni, kungakhathaliseki ukuba yintoni na uhlobo okanye fashion ifike okanye imibala ukuba ibhekiswe. Into ebuhlungu ngezinto ezifana nale meko ngokuphathelele Trayvon umgama kaninzi iba banzi & kubonakala amanyathelo abaninzi zithathwa umva kunokuba phambili, ngenxa yokuba abaninzi engagqibekanga ekuthatheni macala zendalo (umbala umzekelo) kunokuba nokukhetha macala esekelwe kubulungisa / sikweni. Ubukumkani bukaThixo kufuneka utshintshe indlela iilensi siza enxibe ukubona ihlabathi. Kufuneka sibe malunga ukwenza ngokusesikweni phezu zokubambela ngokobuhlanga zethu. Kufuneka ube ngokuthanda inceba ngaphezu kokuba iphenjelelwa umsindo lokuzingca.
Oku akuthethi ekugqibeleni ngumba lobuhlanga. Lo ngumba isono ebonisa ngokwayo ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo, maxa wambi ngokuthatha macala esekelwe kubuhlanga. Abantu abaphuma kwiintlanga zonke ezahlukeneyo bazibandakanye & Ungawavala eachother. Asimele ningazimiseli umbala othile (ezahlukeneyo kuneyethu) olokugqibela utshaba. Abantu abanesono iintliziyo bazibandakanye. Yinto na iintlanga ku & of bona ekugqibeleni oko kwenza ukuba. Ukuba silibale ukuba & aphile ngezantsi umgca oko kulindelekileyo abemi umbuso, siza ukuzoba imigca esekelwe kubuhlanga & kuphela nje phezulu nongeza ingxolo.
Ngamana balwe ngenxa yobulungisa apho kufuneka ukuba wawalwela, nje abo siyakwazi ukukuqonda, kodwa abo basweleyo kungakhathaliseki. uSathana & Isono bazizo iintshaba. Baya oyisiwe uYesu esiphambanweni & ingcwaba engenanto. Ngamana kuqala kuchazwa umbala obomvu phezu kwalo naluphi na, umbala igazi likaKristu ukuba thina ngabahlambulukileyo.
Nicole • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:55 mna • impendulo
I ngokuqinisekileyo ndiyavuma ukuba uhlanga ekugqibeleni ngumba isono, ke ukuba ayinakuphikiswa. Kodwa ukuchaza imiba isono esithile kusinceda silwe nabo ngempumelelo. Sex ukurhweba kungunozala, a umba inkanuko kodwa ekuwiseni ukuba eyahlukileyo kakhulu kunokuba ekuwiseni umdlali mkhuba isono. IBhayibhile inemizekelo emininzi kwemigaqo efana kunye. Bonke ntliziyo kufuneka usebenzele ziqondisa abantu kuKristu, isicombululo sokwenene kuphela.
Iimbotyi • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:55 mna • impendulo
Mna yobuKristu lokuqala, ngomntu omnyama- okanye lesithathu okanye ukunyaniseka nje mna ngumKristu. I inkxaso Trayvon kunye nentsapho yakhe ngoba emnyama, kodwa ngenxa yokuba itakane. A Isigwebo sentambo Punch kunzima kakhulu isivakalisi intliziyo yam okanye isazela sam ukuba basingathe. Trayvon waba kakhulu kangaka ukuba bafunde ebomini… Ngaba thina ukugcina iliso ukuba neliso, nezinyo ubulungisa izinyo noYesu? Ayikwazanga Trayvon ayinabelanga wadutyulwa ingalo okanye umlenze? Kungani intliziyo yakhe? Ndiba buhlungu nje oko kukuphulukana nobomi, yaye akukhathaliseki ukuba umbala yena- Umntwana ufile. Ndiba ke ndinaye nje abadala, Zimmerman uye umthwalo ngaphezulu (emehlweni am) ukugcina ukuzola imeko. ngoku, akazange enze ukuba? Ukunxibelelana ngendlela lobuhlobo ukuba iwotshi? NguThixo kuphela owaziyo. Kwaye uThixo kuphela uya kwenza okusesikweni kokwenyaniso.
“Zonke endiyaziyo mna ekhaya yaye oku [ihlabathi] akukho ndawo yam leyo.”
Nathanial Poling • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:56 mna • impendulo
Ngaba Sithatha Zimmerman kujongwe kuzo intliziyo yakhe? Ndiqinisekile Zimmerman belikhetha ukuba ukumbulala umntwana ukuba wayezama inqondo bakhe.
Iimbotyi • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:56 mna • impendulo
Bullet yaya ngqo entliziyweni, ngoko bekuya kuba esebenzayo ukucinga ukuba wayezimisele Zimmerman kaThixo.
Nokuba ukhetha yiphi na lakhe awukwazi ukutshintsha into ngokoqobo. Mna Siqinisekile ukuba mna ukulimala, kunye ndibene umpu (leyo, akunakwenzeka), I botola esiswini sakhe, ingalo, umlenze- kwenye indawo ngaphandle entliziyweni yakhe.
Kuyabonakala ukuba akuzange ube Komnye umlo… ukuba waba ixesha elininzi ajolise ubungakwazi wadutyulwa emoyeni yaye lo mfo abaleke
Tylor • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:00 mna • impendulo
makhe ukuqhubeka ngokuxoxa umba obuhlanga, ewe. kodwa bayeke amanga ukunxulumana ubuhlanga nale meko. emva konyaka yokuqokelela mntu bungqina ngonaphakade nako ukufumana naluphi akemi ubungqina nobuhlanga zimmerman ngayo ngaphambili okanye ngobo busuku. masenze ayeke ndisukela iziporho sigxile nobuhlanga real – efana uhlobo eendaba ukutyhubela kulo mzekelo ukuze ivuse ubutshaba ngokobuhlanga size thina ngaphandle nje ukwandisa kwiintlelo zabo.
tony Cline • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:00 mna • impendulo
Ngaba ngebala, ukucinga ukuba kukho umntu omnyama kuba ngaphezu ingozi kunezinye iintlanga xa Afrika-baseMelika zenza 12.6% labantu, kodwa enze 49.7% yokubulawa, kwakunye ipesenti elibi kakhulu zodlwengulo, laliphezulu, kwenkunzi, yaye zonke ezinye ulwaphulo i FBI umkhondo ngaphandle dui? Kukuba ngebala, okanye ngaba nje okrelekrele izigqibo ezisekelwe kwiinyaniso ezifanelekileyo? Mna wayengathi ayikho ubuhlanga; iya, kwaye macala onke. nokuba, kukho okungakumbi incoko kunokuba uthi wonke umntu avakalelwa ayikhuselekanga phakathi kwabantu kwezobalo kusenokwenzeka ukuba izaphuli-mthetho nobundlobongela kakhulu ngakumbi na ngebala.
Washington DC Evangelist • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:00 mna • impendulo
“Ntanda, ze zint'anda, kodwa ushiye ukuba ingqumbo kaThixo, kuba kubhaliwe kwathiwa, "Impindezelo yeyam, kuya kubuyekeza mna, itsho iNkosi. "Kunoko, "Ukuba utshaba lwakho lulambile, luphe ludle; ukuba lunxaniwe, luphe into eselwayo; kuba ngokwenjenjalo ke, woba ufumba amalahle omlilo phezu kwentloko yalo. "Musa ukweyiswa bububi, boyise ububi ngokulungileyo.” ~ Roma 12:19-21
C. • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:01 mna • impendulo
Andazi ngenene uphikisana nayo nayiphi na wathi, ingakumbi indlela amabi ngayo xa abantu banikwe angabacingeli ngaloo mini ukuba zihlandlo ngosuku. Kodwa ngenxa abahlobo kunye nabanye namarhataa Ndiyazi ukuba, kuba inxenye yabo, ukupha ukuba kuzuze kwamathandabuzo ndisheke babo babulala. Eli hlabathi yaphulwe kangaka libi maxa wambi, sisazela yaye junk yonke indawo. UYesu kuphela azivale ukuba ivela kuyo.
I hate ukuba kwafuneka lijongane laa nto. Kwaye I hate ukuba ngeendlela ezithile iiprofayili kuyinto lulubi super, nokuswela embi (alikho kwimeko Zimmerman). onzima Its too, kunye namajelo eendaba kunye nenkcubeko eyamkela uhlobo nowomfanekiso phantse eshumayela evulekileyo, ndlongo, namthetho zidla. Yaye ukuba kukho abantu ekwenzeni imali off kule inkcubeko ubundlobongela kunye ukungahloneli. Kwaye abantu abaninzi kakhulu ukuqonda ukuba yintoni ngubani na ukuba kwakunjani ukuba ezinye i guy usikhathalele ngaphantsi malunga esazi ukuba kuthetha ntoni ukuba ezinye i guy.
Ndiyakuthanda ukuba uthando lukaThixo unamandla kakhulu kangangokuba ngaphezu ihlabathi. Ndinqwenela ukuba uthando lukaThixo yayiza kakhulu kwi ehlabathini ngathi, kwaye hayi ngaphandle kokuba thina.
Le ngxoxo kufuneka nakanjani uqhubeke. :)
izinto Great Mr. Lee. Inkosi ikusikelele!
apallo95 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:01 mna • impendulo
ngelixa lobuhlanga into enkulu kakhulu labantu libonakala ukulibala ukuba zimmerman kwaba aventura yena. nje ukubeka ukuba phaya nje into ekufuneka zigcinwe engqondweni xa lo mzekelo kuxoxwa
Lizzi • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:01 mna • impendulo
Ndikholelwa ngendlela esebenzayo ekulweni lobuhlanga ukuba uyamoyika uThixo, abantu abamnyama enyanisekileyo abaphila ubomi okuthoba zithetha njani ukuze abonise ukuba uthi Akukho, esono ngxaki, na uhlanga. I nombono eliphezulu kakhulu phantse onke amadoda abamnyama kunye nabafazi ndikhe nethamsanqa ukubiza abahlobo kunye mentors. Mna kunokwenzeka ngakumbi ukuba ingakhethi cala egameni lwabo ngaphezu kwayo nantoni na… Reach Records yinto enkulu kule, kuba intombazana blonde olukhulayo ubabalo lisakheka luzuza umculo wabo. Yintoni niyenzayo kuluncedo kakhulu.
Lynn • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:02 mna • impendulo
Amen, Amen!! Simele uthando ne uthando lukaKristu uthandazele zombini iintsapho abandakanyeka. Lobuhlanga wokwenene yaye KUBUHLUNGU kum ukubona. Siyabonga ngokwabelana le!
michael • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:02 mna • impendulo
Kuba ndabhalela kona oku ekuqaleni le ngokuhlwa phambi kokuba afunde iposi yakho, leyo ngokupheleleyo ukufumana ngendlela, yaye ndacinga ukuba ukwabelana ngayo
Ngoko xa wena bazimela phantsi iliwa Zimmerman wafunyaniswa enetyala ngenye imini. Abanye baya kuvuyisana, abanye bayakhala. Esi sigwebo iye Balahlula ilizwe kwaye kwezinye iimeko nkqu ibandla. I wayefunda izimvo namhlanje umntu kumajelo eendaba, kunye nezimvo zabo wenza ngokwenene ingafuni igazi lam. Qhuba Ndiye unike ezininzi iingcinga, yaye izimvo zam, kodwa le post ayikho ngoko ntoni okanye musa ukucinga malunga aquital Zimmerman xa. UYesu wathi Isela utshontsha, phantsi, babatshabalalise….(John 10:10) Division ngumbulali cwaka. Bukhula imbewu obukrakra zityalwa ezintliziyweni zethu xa sithatha amehlo ethu off uYesu yaye uya kuphuma ukuba asilumkanga. Luke 6:45 uthi “Umntu olungileyo, ebuncwaneni obulungileyo bentliziyo yakhe, uvelisa oko kulungileyo; nomntu okhohlakeleyo, ebuncwaneni obukhohlakeleyo, ukhupha izinto ezikhohlakeleyo; kuba umlomo wakhe uthetha koko otsho intliziyo yakhe. ”
Xa uYesu waqalisa ubulungiseleli bakhe desciples wabona uYesu itshantliziyo politcal. Bona babelinde ukuba uYesu bawathathe kuzo tye yonke embi ukuba eRoma abehlala esenza ngako kumaJuda. Mhlawumbi baba kulungile kunye noYesu ng ezithile iintloko aseRoma ukuba kwakuthetha ekulungiseni iminyaka bezinto. Kodwa ukususela kusuku olunye uYesu washumayela uthando umkhonzi tot. Ngaxa abanye abafundi probablly wayeyinxalenye kwaphuma uYesu esiya Bruce Lee nabani. Kazi ukuba yintoni babecinga ukuba ngasese? ukuba amaJuda kusetyenzwa umsebenzi ixesha elide kakhulu. Enyanisweni ndikholelwa ukusuka kwincwadi yokugqibela yeTestamente eNdala kwixesha likaYesu into efana 400 kwiminyaka. Abo imbewu ingqumbo nobukrakra ukuba ihlala ityatyambile yaye bakulungele ukuziphindezela. UMesiya Lalide lafika yaye ilixesha lokuba ukwandisa amajoni, kunika pitchforks kwaye ahlasele le nqaba. Kodwa ngoxa ekhanyisa izibane uYesu wayeshumayela ngaphandle umthande ummelwane wakho uze wenze kwabanye njengoko ufuna ukwenza kuni. Oko kwafuneka abagxothe crazy. Ukudibanisa isithuko kukwenzakala njengoko uYesu hung emnqamlezweni, Wacela ukuba uYise wayeza baxolele, ngenxa yokuba babengazi ngokwenene ukuba benza ntoni. Ngoko ntoni le nto yonke?
UYesu lomzabalazo uthando njengoko nabazalwana noodade bakhe thina wabongoza, akukho siyalelwe ukuba benze okufanayo. Ngenxa ekupheleni Uthando imini yinto kuphela nanini ayitshintshe nantoni. Sinokuba ahlasele inqaba, baze baqhankqalaze sonke sifuna, kodwa khona apho kuya kusoloko ajenda efihliweyo ukuba ngaba banayo kuyo kuqala. Love uphilisa kwalimala iintliziyo kunye esihlanganisa ubuhlobo obaphukileyo. uthando, luyakha, ikhuthaza, kamnandi. Uthando ayisigwebi, okanye ukwala, lihlanganisa. Thina ayakhawuleza ukulibala ukuba ngoxa bafa bonke aboni kuKristu igazi lakhe elaphalalayo kwenziwa ukuba ifumaneke: izityebi, abahluphekayo, the black, abamhlophe, (kunye nayo yonke imibala phakathi)ibanzi, gay, intandane, i ithemba, abangenamakhaya, abavikivekileyo, i wenqaba, benkolo, i islamic, i terrorist, umntwana abaxhaphazayo isela, umongameli bank, ummeli, i womlilo, kwezepolitiki, udokotela, wonke omnye umntu ukuba eke warhola nomoya kulo mhlaba, UYesu wabafela. Ukuba kukho uqhankqalazo ukuba kwenziwe ngoko makube emasangweni of Hell yi umtshakazi kaKristu, echaza ukuba We umthande, siya kukhonza, siya ukuxolela njengoko uYesu asenzele kona.
eric • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:02 mna • impendulo
Kutheni na African American, Mna ngokwam musa ukubiza Irish American, Ndingumntu nje American, Ndazalelwa apha ayikho Ireland. Bona ke kulapho yocalulo iqala kukuxhaphaz ngokwamaqela, ke thina ukuba ngcono kunawe, Uyaqala. Ukuba ukuhlukana kubangela ubuhlanga, bobabini baba esingafanele, Trayvon, kwaba ngenxa ukuvala Georges’ ikhanda emhlabeni, plus ukuba yena akenzi nantoni na ephosakeleyo kutheni na ukuba ukuthobela nje? George kufuneka Ndiliphulaphule dispatcher yaye namarhataa uyiphatha. Kodwa ke kokutsha iflegi American, akukho African American, Mexican American, Irish American, IsiNgesi American, okanye Scottish flag American, nje American, akulungile. Leyo onyathela kwiintliziyo zonke American owafayo ukukhusela yonke imela. Eziyimiqobo ukufa intsapho Georges nezininzi egameni Trayvon ukubulalana eye yenzeka azilunganga indlela. UNdikhoyo uthi Tyhila kubo enye esidleleni sakho, okanye siye ukhohliwe ngubani ophetheyo apha. Trayvon kwakungekho saint, noGeorge akukho mbulali, bobabini amaxhoba iimeko. Akukho mntu kufuneka nizuzane balibetha kanobom, akukho mntu kufuneka baye balahlekelwa bubomi babo. Oku yonke umdlalo yezopolitiko igunya lowo ulilahlekisayo enkulu ezikhuphile into afuna. Hlala isekelwe elizwini lakho media.
Iimbotyi • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:06 mna • impendulo
Ndingathanda ukuba kuqwalaselwa nje i American. Hayi i American African. Kodwa uluntu yeha, akayi kuvumela ukuba. Mna kanye njengokuba American njengawo nawuphi na omnye umntu. Kodwa eendaba iye yabangela enkulu kangaka ukuhlukana.. kunye nabantu abaye wathenga kulo.
Ndikhumbula omnye imisebenzi yokuqala ngase. Inenekazi emhlophe wahlala ecaleni kwam waza wathi kum.. “Ngoko uyazi wena unguye -American lokuqala Afrika siqeshe?” Ncuma wabheka ngiyaziqhenya. Ngelo, Ndaba neentloni, njengabanye mbono nyani ukuba bafika ukulungele ezu ukubabonisa indlela kakuhle zabo “Ekuqaleni” umsebenzi black uzokwenza. Kungani kufuneka aveze oko yaye kundenza ndizive ukuze… uyinqaba? Ndandifuna nje ukuba itakane eqhelekileyo emsebenzini wakhe okwesibini, liphuma college, kodwa kunokuba Ndaba zibheke usoyika..
Ngoko kutheni na mna ndithi African American? kakuhle, na ukukhetha?
gabetaviano • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:06 mna • impendulo
amagama awesome, uhambo. Uxolo wena Kuye kwafuneka iphumele izimo unayo. Ndimthanda kakhulu ngenxa ukuthetha malunga nale, kunye usikhumbuza abo ukuba babe abazange. Press kwi!!!
david • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:07 mna • impendulo
Oku akunanto yakwenza nobuhlanga. Oh, Ndilibele, wena abamnyama ukuze ucinga ukuba unalo igunya yokuziphatha yokummangalela nabani na ubuhlanga. Abanye bethu bonke racists. Uxolo, ukuba inkunkuma sele ezinukayo elide ngokwaneleyo. Ixesha bayikhuphe komgqomo heeee ngoku lixesha lokuba ukudlulela.
geebee • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:08 mna • impendulo
Ndicela uxolo ukuba baye iiprofayili ngokobuhlanga ebomini bakho. mna, kakhulu, baye bamjonga kunye ngoyaba ngenxa nje bathi
“mholo” ukuba oomabhalane ukugcina okanye abantu ndidlule esitalatweni. Kananjalo lusongelwe ndaze ndaxelelwa ezingezozakhe kwindawo yaye ikhefu engcono, ngokuba mna amhlophe. Intombi yam uye alelwe ilungelo lakhe lokuvota kabini, kodwa andiqondi ukuba yena “disenfranchised”. Kodwa ke andinayo mongers yintiyo ezifana Al Sharpton kunye theNAACP othetha nam; nje ngam. Njengesizwe, kwaye kuMzimba kaKristu, Ndicinga ukuba kufuneka ndicingele uhlanga neeyantlukwano zethu neyantlukwano thina, Kufuneka ukuba ukubuyela yokuba “imbiza enkulu linabantu American” njengesizwe, nokuba sizikhumbuze ukuba bonke bayalingana emazantsi umnqamlezo iBandla. Ugqatso ngaphezulu nobuhlanga kuxoxwa, intiyo ngaphezulu Ndiye, okuzothi, njengendlela lokusinda, kundenza ibitheni bezinye iintlanga okuba sandise iVangeli kubo. Ukuba awufuni ukuba uphathwa thug kunokwenzeka, okanye guy osisilumko, okanye redneck, musa ukunxiba aze enze enye.
Leslie Pollard Stivers • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:08 mna • impendulo
Ngathanda le post. Ndaba nombulelo ukuva amava akho kunye nekhefu intliziyo yam ukuba ukukhumbula ubunyani ukuba iiprofayili yenzeka yonke imihla. Andikwazi ukunceda, kunjalo, ukubuza ukuba yintoni wena nabanye ucinga into ethethwa leli cala ubuhlanga reverse. Kubonakala kum ukuba uluntu abamnyama kanye ngoku iyawutyeshela ngokupheleleyo izibakala kwimeko (Nani linganisani yonke into kwi YouTube) kwaye imkhethela kwi phezu into iprofayili (akukho bani owaziyo ukuba Zimmerman wenjenjalo kwaye ubungqina umlinganiswa ulingo lucebisa ukuba gz wayengekho nje ngebala, njengoko baye phandle abantu ukuba babe). Kuthekani ukuba Trayvon ibiphezulu (intsangu kwinkqubo yakhe, afumaneka kwesidumbu)? Kuthekani ukuba umlinganiswa lakhe libonisa ukuba ibingaba thug? Kuthekani ukuba wenza eneneni ukulandela George, aziphose phezu kwakhe kuqala? Ezi zinto node kwaxoxwa kwi zobude kwetyala kunye ubungqina bubonisa ukuba nangona Zimmerman kusenokwenzeka ukuba wenza ukhetho lobulumko (ayithole aphume kwilori yakhe, umzekelo), akazange enze nantoni na engekho mthethweni. Asazi ukuba zonke iimpendulo zale mibuzo, kodwa ngenxa nje mfana omnyama akuthethi ukuba xa ujonga kwaye kukwasebenza thug akayi kufakwa njengenye. Akukho namnye kubonakala ukuba sivume ukuba le kid enogonyamelo (noyise wakhe Sanford kuba wamiswa ngenxa yokulwa, ukweba, ukusetyenziswa kweziyobisi, etc) izigqibo ezenziwa embi kakhulu. Ndifuna ukubona iposi umntu omnyama okanye umfazi ukuba udanduluka athi malunga isiphelo lobu ngaphakathi ekuhlaleni kwabo. Ndifuna ukuba bambalwa ukuba malunga nomsebenzi sifundisa abantu bethu abatsha nabasetyhini ukuba ukujonga ngaphezulu njengoKristu. Nangona amakhwenkwe am amabini abaselula bit lighter olukhanyayo kunam kwaye bangangalifumani amava kanye njengam, Ndibaxelele ukuba encumile abantu abaye bamba iingxowa zabo simshiye wenza okulungileyo. I musa ukuthi ubuhlanga ikhona, kodwa kubonakala kum ukuba kubi ngendelelo ukusuka abamnyama ngoku. Le ntiyo emhlophe seethes kunye ububi kunye nokungahoyi. Abantu benza loo nto kanye Ziyandisukela. Akukho luxolo, akukho ukuxolelwa, ekugqibeleni akukho nokholo kuThixo ukuze kulungiswe umonakalo ehlabathini okanye ukuthembela ukuba ngentlawulelo zonke. Abantu ukutsibela ithuba ukubiza umntu a ngokobuhlanga. AmaKristu aye got ukubamba up inyaniso ezintweni zonke. Asikwazi ukudlala umdlalo ngokobuhlanga, malunga notshintsho isiko thina–Musa ukwenza ngcono “mnyama” isiko okanye “mhlophe” isiko, kodwa ubambe up ndimphakamisa inkcubeko Christos lamaKristu ekhuthaza izinto ezifana nothando, uxolo, nokuthethelela. AmaKristu amele ukubona leli cala ngenxa yenyaniso, kwaye inxaxheba ekhala imfazwe igqwirha wokufuna okukhoyo ngoku. Thandazela zombini iintsapho. Kristu abenzele inceba bonke thina. Uninzi iingcinga zam ngokobuhlanga & isiko apha: http://wp.me/p2C5Cy-VY I samkele iindwendwe kunye nengxelo.
Scott Lee Sherwood • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:08 mna • impendulo
Njengoko umzalwana kuKristu, Ndiya kuqala kuthi ukuba ndiyazi lo ngumcimbi onobuzaza kakhulu ukuba ibandla lilonke kubonakala ukuba zibandakanyeke lonke ixesha kunye akukho sisombululo lokwenene, kwanokuba “isisombululo” (uYesu) ilungile eduze kwethu. Ngoko ke mna ndifuna ukubonisa uthando lukaThixo ngenxa yam blog yakho, kungakhathaliseki ukuba iinkolelo zam.
Xa ufunda blog yakho, Indawo yakho kwabonakala ukubonisa ukuba gz kufuneka ukuba ababanjelwe ukubulala degree 2 nje ngokuba “profiled ngokobuhlanga” TM. Oku ayikho indlela esebenza ngayo inkqubo yenkundla. Awukwazi ukucela yijaji, ukuba akunike “yokuziphatha” ukuwina okunika ubulungisa kuba nje omnye mfo akayithandi umbala yesikhumba sakho. Izibakala kukuba gz ayikho omhlophe nangona oko eendaba / NAACP / Hollywood Uboniso / kunye Rev Al angathanda ukuba ukholelwe. Yena ukuba uhlanga olungumxube kokufika / sokwehla Latino waza wakhulela kwintsapho elinamasiko. Yena “profiled” TM ngenxa ngokuqhekeza kutshanje okwenzekileyo ekuhlaleni hlwele. Ekubeni hoodie kwi neebhulukhe, elandelayo othile emva, awukwazi uthini uhlanga / ngokobuhlanga ukuba. I football umqeqeshi banxibe hoodies lonke ixesha ekwindla, nenja yam iye nton mna ekufikeni endlwini yam xa ndiye hoodie yam ngenxa yokuba akazange bakhumbula. Awunakho ukuhamba zibe iibhanki ezininzi okanye imibutho credit unxibe hoodie. Baya ume ucele ukuba isuse kuyo. Same uya kuba iminqwazi kunye iindondo e izikhungo zemali. Ba “iiprofayili ngokobuhlanga”? Akunjalongo noko, kodwa ke “iiprofayili”, kwaye oku kubi. Sonke siyafuna ukuba omnye lonke ixesha. yebo, Mna kwalandelwa ivenkile yokhuseleko phambi kokuba, kwaye sele wayeka ngamapolisa kunye ngemibuzo phambi, kwaye zonke ivenkile lula izikolo kufuphi kakhulu eziphakamileyo, abayi bavumele abafundi beze kunye oobhaka kwaye ukunciphisa inani labafundi evenkileni. Ndihlala California nesixeko ubomi mna elinamasiko. Xa uninzi kwiivenkile ezifana Safeway lendawo yam WalMart, ukhuseleko okanye ilahleko amaqela zokuthintela babe bambalwa ezininzi abamnyama, die, ethnicities kokufika. Ukuba ukrokrela umntu mhlawumbi ulwaphulo-mthetho, okanye ulinganiso “profile”, na ubuhlanga ukuba landela zijikeleze evenkileni okanye ukugcina iso ngazo, okanye uyeke ukuze bebuzana ukuba zombini omnyama ..? Ndikhe ndibone oko kwenzeka, ngoko ke umbuzo osemthethweni.
Kubonakala kum ukuba uninzi abantu ukuba akuzi kunye sigwebo yaye zezona uyakhala malunga kulo ranting kukuba amalungelo oluntu Xhosa zakhe phula. Ngemihla yanamhlanje kunye nobudala, kunye ulwaphulo-mthetho olugqugqisileyo kanye nokudelela ubomi babantu, apho amagama afana imbeko yokuthembeka yalahleka lulwandle “yintoni eya kuba yinzuzo kum” kunye ilungelo emqondweni kwandile, uninzi lwezi abantu ababa akunike kwenkcazelo eyiyo “amalungelo okuhlala”. Bona aqondwe emva jackwagons ezifana Rev Al Sharpton, kunye NAACP nasekuqaliseni nalwazi bentlalo yabantu abe njengoRakeli Jeantel ndiyenze umntwana ipowusta ityala labo ubuhlanga. ngokwenene? Ngabo aba abantu wakhetha ukuba balwe “amalungelo okuhlala” ubuhlanga mpi uluntu abamnyama? Aba wena ufuna ukuma nge? Ndiyacela. Ndicinga Dr. Martin Luther King wayelila ukuba wabona ntoni abantu esekisini ezinjengezi kokuvula ubuhlanga kunye namalungelo oluntu ukulwa, ibe. Inyaniso kukuba ubuhlanga ayikho utshaba ephambili kwakhona Melika abamnyama. Hayi bavale. Mnyama ku ulwaphulo-Black, birthed yi yokuwa oluqhubekayo iyunithi yosapho, kwaye catalyzed yinkqubo ethi ukuba gov't unetyala kuwe into, kwaye uza kunigcina nina, yindawo elungileyo onokuqala, ukuba ngokwenene ufuna ukubetha isigebenga inkulu ubuso zoluntu abamnyama. Ngelo, kukho abathile ezijongene izisombululo kunye nqo ezinye zezi imiqondo. Le abantu kwiZiko National for Research nkqubo kaRhulumente Project yazo 21 Isinyathelo abantu endiya ingqinelane ngokwam kunye nokuxhasa imini yonke.
Ekugcineni, uthando lukaKristu uya kuphumelela. Njalo wenza. Kwaye kuya kwenzeka intliziyo enye ngexesha.
Makhe ngokungcola lisithi ukuba ndiyazi ukuba ubuhlanga ukho yaye kwenzeka ngemihla. Kodwa likhulu kune ukuba. Yonke uhlanga okanye ubuhlanga onamava inyeke enezothe ubuhlanga zidalwe nguThixo likoyise oku, kwaye uza kuba mkhulu ngaphezu koko intiyo. Amadoda amakhulu kunye namabhinqa zembali abamnyama baseMelika ngokuyintloko wenza uphawu zabo kwizizukulwana ngokuthi ngokuvumela lobuhlanga ukuziphelisa. Bavuka ngaphezu iimeko nokweyisa kunjalo. Bona ukuba bayeke kwaye basebenzisa ubuhlanga njengesizathu, kodwa awazange. Ukuba ukuzingisa efanayo kunye namandla uThixo uSomandla elikhoyo nawuphi na kuthi ekudimbazeni nokuba yintoni na bethu ubuso.
Enkosi ukufunda, kunye God Bless wena ..!!
alan_d • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:09 mna • impendulo
uhambo, Ndiyaluthanda abafunde, nonpartisan, imbono christian yale posi. Nje ukufumana phandle phaya, Ndingu omdala umfundi Grad emhlophe 26yr ukusuka AL abahlala Kulungile. nokuba, emva kokuphumelela Auburn 4 Kwiminyaka eyadlulayo, Ndaya kuhlala kwi D.R. Congo for 2 kwiminyaka. Ndiyavuma, ukukhula, phambi kokuba ndibe ngumKrestu, Mna kangangoko ibe ngokobuhlanga njengoko 85% lwenkcubeko ipoma ngeenxa zonke kum. nokuba, intliziyo-omtsha ukuba uKristu uye wandinika iye yatshintsha ukuba.
Ingongoma, ngoxa abahlala Congo, ngokoqobo wonke ngeenxa zonke kum nangaliphi na ixesha elinikiweyo luyavutha. Ndandiyithanda bantu baphila emhlabeni, asebenza imini, kwaye phantse bonke ndadibana. nokuba, ukuba isiko, kwakukho abantu I profiled. Abafana ehamba emarikeni kungekho nto yokuthengisa, okanye nayiphi na bayayithanda into, umzekelo. iipokotho yam sasuswa kabini, nakuba ngokukhawuleza ngokwaneleyo ukuze ubambe guys kwaye ufumane izitena yam nokia emva. ngokunjalo, amapolisa * jikelele * ukonakalisa. I agciniweyo ngalo lonke ixesha ndabona ubani iyunifomu. I Ubanjwe, abophe, okanye ukhathazwa amaxesha ngaphezu Ndinokuwabala ngamapolisa / amajoni, njengoko abaninzi balapha bendisazi. Ngaba ezenza kube ngebala kum ngesithunzi ezo iindidi zabantu kuba yenzeka ukuba abamnyama? Ngendlela enye, njani yobuhlanga xa uhambisa umfazi wam ukuya kwelinye icala lomzimba wam xa ehamba ngaphambili umntu omhlophe endicinga ukuba ibukeka ibitheni? ingqiqo yayo efanayo, kwaye kundilulamela, ukuba ayikho ubuhlanga. ingongoma yam kukuba iiprofayili ke ithuku yabantu yendalo yaye * ukuba * ngokobuhlanga, kodwa oko akusoloko.
Adolf • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:09 mna • impendulo
Ukuba nawuphi na umntu akafuni ukuba mthetho, mhlawumbi ukuba banxibe iyunifomu. namhlanje, phantse 70 kweminyaka emva kweMfazwe Yehlabathi 2. Yintoni ngaba ucinga umntu enxibe iyunifomu lwamaNazi? Kuba nje endombathisayo ekunene?
gdoggydog05 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:10 mna • impendulo
nayo. i Ukuvakalelwa yinto ekhoyo ngokobuhlanga. ukuba ibhaso okanye uqeqesho esekelwe kubuhlanga. yaye esilwela ukuba xa intatheli emhlophe, njengam….kokuba uyagxothwa ukuba uthi into ephosakeleyo uhlanga. kodwa ukuba intatheli yakho emnyama kwenu ukuthi abantwana amhlophe kufuneka afe, ukuze America ukuqonda ubuhlanga (link ngezansi). khangela, le yingongoma yam. i mna bebetha kuphela kwezi zinto, ngenxa yokuba i ndifuna amaKristu ukuze uqonde ukuba kuya kusoloko kukho imiba uhlanga kumacala omabini. i musa ukuba simele siye ngendlela efanayo njengoko ihlabathi engena kuwo. ngokuba zonke izenzakalo ubandlululo abamnyama, uyakwazi ukufumana ezinye phezu kwezinye iintlanga. nangona i ukwenza ukuqonda ukuba ubukhoboka yaba yinto horrid kunye ancesters zam, ngempela, uya kuze uqonde abamhlophe abazalwana bam abantsundu kunye noodade ookhokho abaye through.we akufuneki kona ukuba naluphi na uhlanga ukuzama “alinganayo” izinto. ubungqina ngongoma kukuba koThixo oyinyaniso akasoze ukwenza oku!!! Ngaba isandla uSomandla ukuba uThixo yokufunda esekelwe kubuhlanga??? NANINI akukaze akukaze. Mhlawumbi isekelwe kwingeniso. Kodwa uThixo akasoze ukubonisa ubabalo esekelwe kubuhlanga. Israyeli okhethiweyo, kungekuko nakuyiphi na into kubo, kodwa iinjongo ezilungileyo zikaThixo kuphela. yam “abahlobo abadala” aphatheke le, kwaye yandisa kuphela iingcinga zabo ngokobuhlanga. “handouts” kwaye “imigangatho double” nolaka nabo. Kwaye ke impikiswano ukuba uhlobo-lithi “i nje cant aqonde umzabalazo” okwenzakalisayo kakhulu kum. ithi ukuba i ungaya kuphela kude nabazalwana bam abantsundu… i akunakuze ube umzalwana wabo nakuba, kuba abayiqondi into yayo ongathanda ukuba nabo. Ithi ukuba amava umntu omnyama asahlule, ngaphezu kaKristu kusenza sibe. Yiloo nto mna ukubona eli nqaku engaqondanga bathi. Okunene ndiyazi ukuba kunjani ukuba profiled. I a kid kanye. Sonke siye ngamaxesha anzima. Kusenokwenzeka ukuba uyayazi into yawo ungathanda ukuba umama kunye nomhlaza, njengam. Okanye ukuze uyazi ukuba kwakunjani kuthunyelwa home for kids ezimbi xa Ndandi- 12 iminyaka ubudala, kweSakhiwo ezimhlophe yam, okhomba, usapho suburban waza washiywa ukuba azibuze ukuba kuxa kutheni abazange uyandithanda. Makhe ukuqala ukugcina amanqaku apha. Oku ngokupheleleyo yimeko engafanelekanga ugwenxeke kwaphela ukuba sigxininise kwezo amava awodwa. Masize kunye nemihlali ukuba banikwe ubabalo xa thina hola ukufa.
Alex Ericsson • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:11 mna • impendulo
I OLUXATYISWA mathandabuzo ukuba Uhambo ufuna ukuba ukuhlutha abazalwana noodade ngokwesiseko ngokobuhlanga. Yena umntu omnyama ecaweni emhlophe ubukhulu becala ngenxa yokuba liye kwaye ngexesha elinye wabonisa uxabiso. Kodwa kukho izinto yokuba abamnyama eMelika ezikhethekileyo yaye incongruent kakuhle nabanye ngamava enkcubeko!
ke PLEASE, Ndiyakucela nonke, ukuqonda umahluko phakathi ngovelwano lokwenene novelwano lebyi. Njengoko sihamba kunye nabazalwana bethu noodade kuKristu, siya kuba amathuba ezimbalwa icebiso ukusuka kwindawo novelwano ethwelwe amava ekwabelwana kodwa siya kuya kubizwa ukuba isigulane, umsebenzi yothando novelwano olunentsingiselo. Yiloo apho uphulaphule ubunzima abantu baye bafumana, akazange sokunqanda semthethweni ukubandezeleka wakhe ngokunika counter-yimizekelo trump namava abo, kwaye njalo kambe ukuba icebo lethu, nangona oko kukhonza ngamnye, akayi kuba ilikhubalo ekhawulezileyo kulunqande intlungu yabo, unxunguphalo, okanye umsindo.
Kungakhathaliseki ukuba naziphi iimbono zisetyenziswe tenxileyo ngokugqithisileyo kulo mzekelo okanye uhlanga, kakhulu ezininzi
nathi ibandla (esp. nge kwimidiya) wax efundileyo phezu izinto zehlabathi kodwa zigcine
yixina kakhulu efana abahlobo uYobhi ezilukhuni. Ngoku lixesha apho abantu badidekile engonwabanga kakhulu. Abantu ZONKE imibala kubi emehlweni isiphumo sale meko. Inkoliso yabo kufuneka umonde nentuthuzelo yokwenene. Akukho ntetho kwinkqubo yomthetho okanye “media abonakele”, hayi igcina-and-switsha imizekelo, okanye ubajongela phantsi punditry yezopolitiko. Khomba kuYesu onjengawe ninobulali.
uDina Robinson • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:11 mna • impendulo
Xa intombazana eselula, malunga nezakhiwo abaneminyaka, Mna ngokobuhlanga agciniweyo kwelalisakuba Eckerd Drug Store (ngoku CVS). Ndandingazi ngelo ubudala oko kwakusenzeka kum, kodwa ndandisazi nje umntwana akufanelekanga. Mna nomama wam wayeyifumana $20. Ndandicinga ukuba sisityebi. Ndandifuna ukuya kuthenga iilekese kunye nezinye izinto evenkileni. Kodwa omnye oomabhalane intengiso wandibona uhamba epasejini yedwa kwaye babecinga ukuba ndiza bebe okanye wenze into engalunganga I ndiyaqikelela. Walandela zonke ngeenxa zonke ivenkile. Kwakungathi kubanikazi ukuba eli nenekazi landela me. Ekugqibeleni ndafumana umama wam kwenye ipakishwe wamxelela ndiziva ngathi ezivenkileni kwakhona. Ndamxelela xa eshiya ivenkile ntoni ke yena wathi nenekazi mhlawumbi ndandicinga ukuba uza ukweba. Oko kwandenza buhlungu ukuba wacinga intombazana encinane wakhangela njengesela. Fast phambili ekubeni umfazi omdala kunye nto inye eyenzeka kum njengomntu omdala kwivenkile nice. Mna ndicinga ukuba uhlobo nto kufuneka kwenzeke ezi ntsuku ukungabi. kodwa ke ngelishwa, ubuhlanga ayifile. Akekho nobandlululo ukuba umahluko zabanye ingaba abantu Amerika okanye kwamanye amazwe, gay or ngqo, otyebileyo okanye ezinqinileyo, izifundiswa okanye ofundileyo, usisityebi okanye ulihlwempu. Kunokuba lokubhiyozelwa ukungafani kwethu nje thina “ngokungakunyamezeli” kunye. Sonke athwale ubandlululo kanye ndiyazi mna kufuneka basebenze sithande umakhelwane wam njengoko Ndizithanda nam. Usenokungabi nako ukutshintsha umntu
ubandlululo, kodwa unako ukutshintsha isimo sakho malunga uwamkela njani na abo
“pre-ijaji” wena nendlela esisabela ngayo kuyo. Ndiya kuba nonyana omnyama
ne Dominican. Ndifuna ukuba bakhule nokuhlonipha zonke iinkcubeko nokuba
ukhetha ukuba abe American Afrika okanye kokufika okanye zombini. Uya kufundiswa
ukuthetha IsiNgesi and Spanish. Uya kufundiswa imbali zombini ezi ndlela zokuphila.
yena ke okona kubalulekileyo ziya kufundiswa ukuthanda uThixo nokuthanda abantu. Ndiyakholwa iqala ekhaya noko esiphila oko sikufundayo yaye okubuhlungu noko kubonakala ngaphandle kwihlabathi lethu.
Troy Frasier • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:12 mna • impendulo
I kufuneka, Ndimhlophe, yaye ndiye ndafumana into efanayo zombini nje umntwana abe mdala…. Andazi ukuba abo izikhathi uhlanga ezinxulumene. Inyaniso, haha, amaninzi amaxesha oomabhalane ngeenxa wandilandela njengento kid, elivisayo, etc. Nangoku Ndiqinisekile iikhamera landela xa ungena Wal-Mart I, njengomhlobo wam osebenza LP uthi ndihamba njengesela kubonakala…. Ngenye indlela, . Iyenzeka! :)
Nathanial Poling • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:12 mna • impendulo
I ujike noCharles eliseBarkley kunye Bill Cosby kule enye… kumajelo eendaba Wavuthela ibali buhlungu ibe ngumbhodamo mibi kazwelonke. Ndiyathemba Zimmerman ihamba phambili kunye ngokumangalelana nonyeliso kwi NBC and ABC.
Antoine Mason • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:12 mna • impendulo
Wena Abaqondi ukuba uCharles eliseBarkley kunye Bill Cosby musa bavumelane kwimiba ejikeleze ilungelo case?
kwakukhangeleka imibono efanayo kakhulu, ukuba isinqumo ilungile
george Lewis • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:14 mna • impendulo
kuzo zonke ezi ngxoxo kufuneka sibe umthetho ngokwawo sichithwe. Nceda ukuxhasa imizamo yam @ moveon.org . A lwezikhalazo inokufumaneka I Trayvon Ukuthunywa khona. SIFUNA icele nenkxaso yenu Nceda ungene , ukuthumela ukujikelezisa , utwithe kwaye ubuze yonke abahlobo bakho , usapho kunye umfowunelwa ukuba benze okufanayo. Ngaphandle utshintsho kulo mthetho embi le meko yenzeke kwakhona.
Nathanial Poling • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:14 mna • impendulo
self yokuzikhusela? Yima somhlaba wakho, kwakungafanelanga lisetyenziswa xa kuthethwa
danezu • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:15 mna • impendulo
“Ezi ndidi cingela elizothe ababuxoki. UThixo wenza bonke abantu ngokomfanekiso wakhe kunye nexabiso nokubaluleka kwento. Kodwa sonke sinesono yaye siyasilela ukubonakalisa ngokomfanekiso kaThixo njengoko kufuneka. Ngamnye kuthi wabuya ezonweni zethu, trust Krestu, kwaye kwenziwa kunene nguMdali wethu. Kodwa nangezisizilo ubuhlanga kwaye akhethe apho abantu ezi nyaniso kufuneka isetyenziswe. ubuhlanga uthi, "Mna ezixabisekileyo yaye kulungile, yaye bonke abo bantu bangendawo.” – ILizwi Up uMzalwana uLee!
Xa uBukumkani uthatha blinders uye indima ingcinezelo olucwangcisiweyo American ubuKristu, ingakumbi ngokohlobo White Ubukhulu, capitalism nokuba ngamadoda, siya kuyaphula imixokelelwane yobukhoboka. Ezi oozilawuli nobubi lokomoya iindawo eziphakamileyo iLizwi uthetha.
Mr. 116 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:15 mna • impendulo
Umfazi omnyama wadubula emoyeni eFlorida ngenxa yokuba leya ukuba umyeni wakhe okutshabhisa ukuba ukuhlasela kwakhe. Uyazi ukuba yintoni eyenzeka, waze wagwetywa ukuba entolongweni ngenxa 20 kwiminyaka.
George Zimmerman emahlamvini awo aphezulu itakane emnyama eFlorida, waza wafunyanwa engenatyala?!? ngokwenene?? ubuhlanga, kakhulu ngokucacileyo, imbambano kule meko. Ycinge.
Nathanial Poling • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:16 mna • impendulo
yaba ubandlululo nomthelela apha kakhulu?
lewrites • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:16 mna • impendulo
Mna white / lweenkobe American, kwaye nangona Native kum ipesenti encinane kakhulu, ilizwi lam isikhumba mnyama kakhulu kwaye sijonge kakhulu njenge Native. Ndakhe uyacalululwa ngabaMhlophe, babamnyama, yaye malunga zonke uhlanga nje onokucinga ngayo.
DC Talk kaThixo ingoma OweBala Abantu ushwankathela iingcinga zam kahle:
Sicela abantu abebala yaye sihlala kwindawo angcolile
Sicela abantu abebala kwaye asibize uhlanga lwabantu
Sikuphathele imbali ezigcwele iimpazamo
Kwaye thina singabantu ezinemibala baxhomekeke kwi ubabalo Holy.
Ezo sasazo kakhulu ukuba ityala. Kodwa predispositions zethu, izenzo zethu ziyaluthundeza oko nemidiya kuthi. Ukuba siza kukhangela umbala elidlulileyo, ukuba wayeza kubona thina imigwebo kudlule phezu kwabanye ngokusekelwe ejongeka ngayo okanye izenzo, xa Andazi nokuba nathi…mhlawumbi basebenzele kuyidiliza le imiqobo kwaye anike eendaba na aphe ngaphezulu.
Joanette D. Clemons • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:17 mna • impendulo
Eli tyala akukho nje malunga nomthetho syg kukwahamba self argument yokuzikhusela. Lo mntwana eneneni wafunyanwa enetyala. Eli tyala kwakhona malunga nendlela umthetho azijonga luxanduva lomntu, gz, abaye bazibeka esilimaza ngendlela. Kukuphi wemfanelo, ingqondo ukuzeyisa badlale indima kule meko? Xa uRakeli Jenteal (ungaqinisekanga upelo) kwaxoxwa, uthe “Abazali bakho zifundisa ukuba xa umntu ibitheni uyakulandela, kufuneka uqalise. Akukho umzali ufundisa abantwana babo ukuba zime. Ukuba wenza, babeza kuba namntwana.” Xhosa esengumntwana. Wachazwa ukuba amapolisa gz njengomntu elivisayo babo. Oku ayikho liyavumelana, le iqiniso. Trayvon waye umntwana ekhula mdala. Xa gz wabiza amapolisa, wenza into elungileyo, xa wagqiba ukuya nxamnye nentando igunya, ukungonakali ulawulo kunye imeko waba yonke embi. ex ngokomoya.: Mangaphi amaxesha kufuneka sathandaza waza wacela ukuba uThixo asincede yokusingatha imeko kwaye ukwayama ekuqondeni zethu kunokuba ukuphulaphula ilizwi lokwenyaniso igunya ukusibona nge. Trayvon ayikho apha b / c gz ayame ingqondo yakhe. Wathabatha izinto ezandleni zakhe emva kokunikwa imiyalelo ecacileyo kunye ezimfutshane ngento NOT ukwenza. Ndandifuna ukwazi ukuba yintoni indima gz xa njengegosa ntliziyo aliliso lomzi yayiba. Ndafumana le ncwadi ku http://www.usaonwatch.org/assets/publications/0_NW_Manual_1210.pdf Nceda ufunde iphepha 27 yeSahluko 6. Le ndoda bawugqithile umda wakhe waza wabaleka ekunene OF uxanduva ekhombyeni. Ona imiyalelo ngqo mandiyibek umntwana ethukile, ngubani umfana womdlali. Yena zabaluma off ngaphezu kokuba ukuhlafuna xa uphuma phandle ukuthanda kunye nemiyalelo negunya. Masithi Xhosa waba umbulali abanamava wathabatha gun gz waza wambulala yena kunokuba? Esi siganeko kabuhlungu kwavuleka ucango eziliqela izihloko ukuze kuxoxwe. Kufakwe, kodwa kungaphelelanga apho, iiprofayili, wemfanelo, I Yima Umthetho wakho Ground, yintoni na intsingiselo yokwenene self yokuzikhusela, kunye uhlanga kakhulu kwakhona uvavanyo-njani kufuneka zijongwe iingqondo wonke. Konke kubonakala ubumnyama iintliziyo zethu kunye neengqondo ekugqibeleni zize ekukhanyeni. Le chain yeengxaki etyeni iimpazamo yenzelwe ukuzisa kwinqanaba olukhulu lokuqonda, ingxoxo kunye nokwazisa. Eli tyala lithumele amaza kulo lonke ihlabathi. Asinto ibali imbali American, akukho bali imbali Black, libali babantu kunye namalungelo oluntu. Akukho mntu ufanele ufe zisekelwe phezu kwiimbono ukungaphangalali kunye nokungabikho ukuzeyisa.
BQPhotography • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:18 mna • impendulo
Idlelo!! Enkosi kakhulu, obhale le!! I iposelwe into efanayo odongeni facebook. Ndiziva singakwazi badlulele ngokohlanga kodwa thina singakwazi ukuthetha ngayo ukulungisa ingxaki!! Aphikise nokuqhubeka profile naluphi na uhlanga. Mna ikholwa ngokuqinileyo kuThixo kweli lizwe kufuneka babuye umva kuThixo. (2 IziKronike 7:14) Sifuna abantu abamnyama njengawe mina, ngubani angangenelela uze uthethe nxamnye ubuhlanga ukufundisa omnye komnye. Kufuneka ume ndimwisele umthetho ngabantu bokuphuphuma ushukumisa ubuhlanga phezulu!! Enkosi kwakhona. Nam ekuniphatheni izimvo ubuhlanga kunye nezenzo ngabanye, kodwa musa ukuvumela zonke kuyo ukufumana kum kuba ndiyazi mna mna kuKristu!! Enkosi!!
uphawu • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:18 mna • impendulo
ngaphandle umbuzo, kukho abo 'ngokobuhlanga’ izizathu zokuxhasa oko bakwenze – entle okanye embi. Abanye bacinga ezimbi nje ngenxa inqanaba bala lintsundu. Kodwa ke ndandiye ndithandabuze ukuba kukho into ehamba kwiimeko ezifana lo ityhila okungakumbi lamashumi yenkcubeko ngaphezu kokuba umntu lobuhlanga. Umzekelo, xa ndibona umfazi ehamba phantsi kwisitrato ibhulukhwe emfutshane kakhulu, eliphantsi sika Itanki-top kunye ezifubeni ukuzihlalela, ucoco make-up, izihlangu eziphezulu (Akukuhle ukuba uhamba), njalo, Ndiya sizakucinga oku umfazi lowo – ukusebenzisa igama esingasebenzi – namanyala. Oku kundinika zero ilungelo ngokwasemzimbeni okanye ngamazwi imbethe, ukuba enze amazwi emqondweni, etc. Thelekisa ukuba isinxibo omnye mfazi – athobekile, kodwa ibhulukwe enomtsalane, umphetho, dress, etc. – ngqo ngaphandle Lands’ Isiphelo (okanye khetha indlela yakho) kwikhathalogu. Yena NGABA kuba kanye njengokuba evakalala njengokuba umfazi #1, kodwa ndicinga ukuba kwenzeke.
Ngokufanayo, xa ndibona umntu omnyama oselula ehamba kum abanxibe njenge 'gangbanger’ – Ndidlala bucala kwaye novalo. Ke kunokwenzeka nguye nomfundisi ulutsha lwengingqi kwaye isiwe iVangeli kunye nam msinyane kunokuba bathi igama ahlabayo. Kodwa yintoni na le 'impahla banger? Ngokuphikisayo, umntu omnyama ehamba phantsi kwisitrato 1) Amazwe impahla End 2) esambathweni yemveli African 3) jeans umsebenzi / izihlangu kunye emhlophe t-shirt… Ndiya kuba zonke endinxunguphala zizo zingathomalaliswa.
ingongoma yam kukuba isinxibo luhlobo lwe kwamasiko. Kwaye zonke izizwe bayalingana. ukuba oko “mhlophe” (okanye brown ukukhanya, bomvu, lubhelu) America ubona video omculo, iindaba zangokuhlwa, newsweeklies, etc. lo mfana abamnyama inkathazo abantu abamnyama abatsha bangamalungu upstanding le banxibe zoluntu… ukuba ukunxibelelana umyalezo eziphikisanayo.
Masithi me linxibe t-shirt iflegi limise kuyo kwaye ulindele abamnyama ukuqonda nje ukuba mna ngokobuhlanga. Ndiyakuthanda nje limise South.
Ngokufanayo, unxibe ngathi ilungu, musa ukumangaliswa xa zabhidaniseka enye.
Efake 'hoodie’ kukodwa na / ukuba oku kunjalo. Kodwa abantu abacinga ukuba ukuba iimpahla / isinxibo alisichazeli ngendlela eza okanye (kubi) bayavuma ukuba wenza, kodwa ibeka umthwalo mkhanyo ukuba inyama yonke umahluko ngaphandle usisidenge.
inyaniso • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:18 mna • impendulo
James Lee • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:19 mna • impendulo
ngamacala aphezulu njengalo sensationalize kunye ingxaki phakathi ngoko faultfully ukubiza “iintlanga.”
Njengoko nomfana imhlophe amadlelo Detroit, Ndava ukuba aphendule ngendlela efanayo Zimmerman ekundilandeleni, kungakhathaliseki ukuba imisebenzi ndaba phezulu ku.
Zimmermans Iimpembelelo imeko yokomoya imbono yakhe Lords awise umthetho wokuthi, …”Ukuziphindezela ndoda embi.” kusenokwenzeka ukuba, Ukubambelela Trayvon Martin ukuba lo myalelo bekulambatha ngokunjalo. Njengoko abafundi bakaKristu, sifanele sikhumbule ukuba ungabi wamangaliswa xa ihlabathi njengamaqoqo “Umhlaba.”
isixhobo yethu ibhetele nxamnye sikweni zentlalo kunye sabela ngokobuhlanga ukuba balandele imiyalelo kaKristu.
Thabiti Anyabwile wamnika umyalezo ngexesha elifanelekileyo 2008 ngayo “Bethwele Image”. Kubalulekile ukuba umamele – http://t4g.org/media/2010/04/bearing-the-image-identity-the-work-of-christ-and-the-church-session-ii/
Uninzi lwabantu babe zezazisi kunye nobomi ezithe esekelwe kwesizindlo malunga lengcinga 'ugqatso. "Kufuneka ukutshintsha ngayo imfundiso ebhayibhileni ngakumbi yohlanga. Okokuqala, kubalulekile ukuchaza imiqathango awasebenzise ngokufanelekileyo, ngakumbi "uhlanga" xa kuthelekiswa "uhlanga." UmKristu kufuneka aqonde umanyano yendoda uAdam, umanyene noKrestu kunye nomanyano ebandleni.
ngekopi • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:19 mna • impendulo
Siye ZONKE phezu abafumana obuhlanga, mhlawumbi. Ukuba akukho njalo, siza. Umntu kwezinye uhlanga uza ukwenza isigqibo ngathi, kusekelwe sijonge okanye isandi indlela.
Siye lonke ityala esenze ukuba, kakhulu, ngezinga encinci. Naliphi na ixesha ubona umntu uze wenze isigwebo–nokuba kokuba igcinwe yangaphakathi–ngokusekelwe kwindlela loo mntu ejongeka ngayo okanye izandi… oko ubandlululo.
Antha REdNOTE • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:19 mna • impendulo
the 911 umqhubi uthe “musa Kufuneka ukuba bamlandele” Oko kwanele kum. Ulingo Zange sele ezifunekayo kunye Trayvon mhlawumbi ukufumana ukwanga ngaphezulu kubazali bakhe (njengoko kubonakala imifanekiso) ukuba Zimmerman wahlala yakhe “lempundu” emotweni KUNYE efowunini til’ beza namarhataa!!!
Louie • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:20 mna • impendulo
ngokuphandle, Ndidanile ukuba ezinye zezi abahlalutyi bathi bangamaKristu, I phantse Ndiyathemba ukuba abanye babo abangabo. Siyabulela Trip kakhulu ngenxa ukubeka intliziyo yakho kule blog, ngaphandle kwe wena ngamava obomi bakho ukuba asazi ngayo okanye ukuqonda. I am a White, Wabadala 24 iminyaka ubudala kwaye nabahlobo abaninzi abamnyama, efana kakhulu ukuba uhambo, abaye profiled yanikelwa ndibe njengomgculeli phambi kwezi zokuhlaselwa abahlobo bam, uthuke, imvakalelo alawulwe. Ndicinga ezinye abagqabazi sezinambuzane misinterpreting amagama Trip okanye ukusebenzisa kubo ibhodi yixina-ajenda zabo kunye nezopolitiko. Trip ongatshoyo nto malunga Zimmerman ngokuba ngokobuhlanga. Zimmerman wenza umgwebo ephosakeleyo imali umfana ubomi bakhe, nto leyo iye yatshintsha usapho olunye ngonaphakade, ubuncinane Zimmerman uyaphila kwaye ephefumlayo. Kwaye lo mcimbi kwabangela ngokwesikhalo imikhosi wonke umntu ahlole ucalu zabo ukujonga imithetho bamphoxayo sonke. Oku kundenza abagulayo ukuba abantu abakwazi ukubona nje ukuba imithetho wadalwa ukukhusela amanye abanjengam (ngamalungelo unearned) aluquki abo abonwa “enye”. Abanye sitshilo umthetho uthi Zimmerman bugwetyelwe ukulandela Trayvon kodwa ke kukubonakala emehlweni kaThixo ukuba ukulandela umntu kuba wayekhangele ibitheni. Ekugqibeleni Ndithandaza Zimmerman wazi uKristu Msindisi wakhe aze ajike ukhetho yakhe embi ibe yinto entle ukuba uThixo unako ukusebenzisa azise impiliso olunye. Ayikho into eya kumnqabela yena uThixo.
Nathanial Poling • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:20 mna • impendulo
Wazi njani Zimmerman wayengenguye umKristu kakade? Ngaba ubukela kwetyala okanye umamele soundbites. Ndicinga ukuba wenze kakhulu izimvo ezigwebayo kule post malunga ubuKristu abantu. Ndiyazi abantwana abaselula ezimhlophe kulawi njengoko kakuhle ngenxa yokuba tattoos. Yeka ukwenza nokucingela lo mzekelo ubuhlanga kunye nokucingela abanye iintliziyo. Zimmerman akwazi ukuba babeneenjongo ezimbi kodwa akukho nto yabangela apho kwetyala xa abantu waweva ifowuni icela ezipheleleyo, hayi abo spliced ​​ukuba eendaba yadlalwa gubhu up umba lobuhlanga. Zimmerman wajamelana yijaji kwaye msulwa phantsi self-yokuzikhusela. Mhlawumbi abanye abantu kufuneka baqale kumbuzo umculo abantu abamnyama umamele ezikhuthaza ubundlobongela phezu uxolo. Martin kwakuya wabuyela endlwini, wakhetha ukuzama ukuba ukwehlula Zimmerman.
luvalo • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:21 mna • impendulo
hello bonke. Okokuqala farmost I am a christian. Okwesibini mna ibhinqa afirican-american. Ndiye ndafunda izimvo apha kwaye musa kundothuse. Mna Yandothusa yi nogonyamelo kweli lizwe (the black abamnyama, sezomthetho abantu abamnyama,element ulwaphulo yolutsha igcuntswana ngokuphathelele kuluntu jikelele, uluntu jikelele malunga ulutsha minoriity). Ukuze Ndithi kuni, inene mna ndiyoyika,yiyo le nto……….xa thina isilungiseleli seglosi uluntu phezu amabala yoluntu ubuhlanga eye yabangela basengozini enkulu ukubuyela uluntu lwethu emva koko kukho apho kwakunjalo 50 yee-. Ngaphezu, xa sicinga ukuba lesibini Melika izifikelele ezinye imo bolunye uhlanga utopia ezamahala thina engozini enkulu yokuphinda uyagula efanayo wambetha amazwe 50 Kwiminyaka eyadlulayo. Ndicinga ukuba abantu bayathanda ukuba ukuwafihla oku phezu ngoba lula kunokuba ejongene nayo kwaye oza kube. Ngoko ke nina, kungase kungabi yinto uhlanga, kuba akusayi kufuneka ukuva abadala bakho nixoxe ngendlela iinkcukacha ukhumbuza ngemihla yobutsha babo,abafumana izinto kwaye i akunakuze uphuphe ngabo
.Kuba ukuze ungabi yinto uhlanga kuba soze azale umntwana omnyama oyindoda ngaphakathi emzimbeni wakho kwaye bayazibuza uya kuphila ukubona 21. Kuba oko akuyi kuba yinto uhlanga kuba inkangeleko nje kwakho kwaye uya kuze kubonwa njengento esisisongelo. Ukuba i waba ezo iinketho kwakungayi kuba ugqatso nto ukuba unaso. Intliziyo yam ingakubamisi-bonke abo baye amaxhoba olwaphulo-mthetho ngenxa yokuba ubundlobongela. I ze ze baye bavuna ubundlobongela. nokuba, uya akuthethelele inkqubo olukhuthaza zokudubula umntu esekelwe imbonakalo,okanye izizathu zokuba bethe mabaphume ebusuku,. Ndiya akuthethelele inkqubo eza kuthatha imali yam yamkelwe,kodwa mna okanye unyana wam akakwazi. Ndiya akuthethelele ubume izinto njengoko zinjalo. America akukho yigadi. Ndiziva imiphumo yokuba baliqaqobana eliphila America ngemihla,kwaye nkqu ebandleni.
bergyman • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:22 mna • impendulo
Ndingu angamaKristu. Ndiyavuma ukuba ubuhlanga isekhona. Inyaniso, kuya kusoloko kukho. Utshaba uya kuqinisekisa ukuba. kodwa lo “uya kuze uqonde ngakum” zokuqwebisa swi nga pfuna. Thina Idiots ezimhlophe ehambisela ubuhlanga. Kwaye loo nto na: racists ziphukuphuku. Ngoko kukho Idiots abamnyama ehambisela ukuba nemvukelo onyusa iiprofayili. Ingqalelo kufuneka zonke sonke thina eliphakamayo ngaphezu kwezi Idiots kunye nokungena kunye nokulungisa umsantsa. Tshintsha eyibhalela. Njengoko besilisa abamnyama… Wowu. I nakwazi indlela uluntu iphatha leyo, kodwa ndiyazi kukho iimpendulo phandle phaya. Ndiyazi uThixo unecebo kunye nesisombululo… kwaye akukho ukwahlulwa kusekelwe umntu ibukeka njani. isisombululo wakhe ngayo UKWAKHIWA, uthando kunye nokubuyiselwa.
luvalo • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:22 mna • impendulo
hi bergyman. I ukuhlonipha uvumelane, izimvo zakho. Enye qaphela nakuba- umbono wam “uya kuze uqonde ngakum” kunokuba alo kuphalala ukukhanya kutheni le nto malunga “eceleni kwami” okanye ecaleni kwakho. Yiyo ke leyo e-nje iiphatheni eli lizwe kodwa ku rectify.This licandelo ukuba Melika asinike aligcuntswana. abadala ukulala amava ezimanyumnyezi ne crow jim. Abantwana besoyika ziya kujoliswa ngohlobo oluthile egwenxa kwinkqubo yenkundla. amalungu entsapho Male nabakhathazwa for DWB '(uqhuba lo gama abamnyama) Ndisebenze nzima iminyaka emininzi ekwenzeni abantu kunye ukuzisa ulwazi ngokobuhlanga ibandla kunye un-churched ngokufanayo. Andenzi esithi ukuqonda ecaleni lam .I'm esithi balihloniphe. Ndiya kuqhubeka umsebenzi wam ukuba asikhanyisele kwisifundo,ngokuba yiloo nto injongo kum uYehova ukwenza kunye ibandla uyakufuna. Ngako oko wathi- Ukusiqwabazel iliso ezingalunganga kokusesikweni kungaba ngokobuhlanga,lwentlalo noloqoqosho,malunga isisu okanye trafficing sex,nayo embi kakhulu. Kwakhona into andikwazi ukuyenza. On kunothi eliqaqambileyo ndizibonile ,isivumo, kunye nokuxolela phakathi iintlanga ngezinga elikhulu amaKristu iziganeko umthandazo kwaye ke ixesha entle ngokubhekiselele, isivumo,uxolelo (kumacala omabini) OHHH yayikukuba into nantso isuke yaba ngathi pslms 133:1-3 ngexesha real. Iinyawo Ulwandle,iinyembezi zaye eliphalala, nakuwo onke amaqela(mnyama,mhlophe,aventura,and die) Wazohlwaya phambi koThixo unendawo ngakuwe enye. Ndilangazelela imini xa “umzalwana uthando aya kuyibopha umntu ukuze umntu” njengoko kuchaziwe kwi iculo ode olukhulu uvuyo. Ndisebenza yaye ndithandaza akukho ekupheleni ukuze ubone ukuba kwenzeka.
bergyman • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:23 mna • impendulo
Enkosi ngempendulo yakho. Andizange akuthethi ukuncwasa ukuba wenza i “ongayiqondiyo…” into, I nje kwakuthetha andifuni ukuba impendulo ukuba impendulo. Ndiyeva ukuba kakhulu xa Ndizamile ukuya kwi incoko malunga ezinye zezi ngxaki nendlela thina uluntu endinokuyoyisa ngayo. Ndicinga ukuba kukho HAS ukuba ukuqonda kunye nezisombululo kunye notshintsho kumacala omabini. Ndiyavumelana nawe. Kuya kwenzeka. I hate nje ukuba ithatha ixesha elingakanani kwaye zonke olimeleyo / baphulukana nobomi andabikho ezinokubakho … kwaye ndiyayicaphukela ukwahlulwa. Enkosi sisilwa umlo omhle. Ndiyathemba niyazi ukuba akukho ngathi ukuqonda iimvakalelo, Ndikhangela nje ekufumaneni iindlela ukuya kumanqwanqwa alandelayo… ukululama, impiliso, ubunye.
luvalo • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:23 mna • impendulo
ewe. ndiyaqonda yaye kufuneka nawe ekulweni nathi . Ndiyaxolisa ukuba umntu devalued igalelo lakho le ncoko kunye / okanye isisombululo kwezi ngxaki. kwaye ndicela uxolo kwi behalf.Would lwabo uxolela sonke thina ngayo abo bafuna ukunceda ukufumana indlela engcono ukuba abathanga nokuba kule ngxoxo kuba nje ulusu lwakhe yakhe imnyama. Ndikholelwa ngamnye abe nento igalelo omnye umntu ,amava ukuze uzuze,uthando ukuba kwabelwane,ukhuthazo kunye nobudlelwane Ongofanelwe (mnyama,mhlophe,lubhelu,ntsundu,etc blue). i Sikholelwa ukuba. UThixo anisikelele bergyman…..pslms ngenye imini 133:1-3 iza kuba yinyani ukuba apha emhlabeni ,ngokuqinisekileyo kunakwelo lizayo.
Amen, Amen. Enkosi amazwi akho uhlobo. Nkosi, ukuqhubeka ukuphilisa ukuba kuya umthetho ngenye imini intsikelelo.
Troy Frasier • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:25 mna • impendulo
Hey Uhambo, Uthando ya nabo bonke, kodwa ngokunyaniseka… kuvakala ngathi malunga nomba ngokobuhlanga, unazo ezinye ubukrakra. Ndicela uxolo umbala wakho isikhumba unenze ekupheleni ukwamkelwa ngabanye calulo. Ulusu lwam umbala kuye zodonga kum phezu abafumana ekupheleni ezithile ucalucalulo evela kubahlali abamnyama, (nangona Andizange nge ngamapolisa). Its a yinxalenye yobomi, indoda. Ndinqwenela nje mna abacalulwa ngenxa yomnqamlezo, hayi ukuba ibala lolusu lwam kwezo meko. Iyenzeka, sele elungile, kodwa kufuneka ukuxolela abo benza oko, yadumisa uThixo uYise uthando kunye nokwahluka lwakhe. Kwaye kube krakra, indoda. Makhe siye kwabo iziganeko ezidlulileyo. Kanye njengokuba kufuneka ukuba aphathe abanye iphutha, uze uxolele yaye umzame ummelwane wakho ukusuka isilingo zokoyikisa xa kugwetywa. Wonke yahlulelwe. Ukuba hayi ibala, yi ukumila, indawo, ubudala, etc. I sele egwetyiwe izihlandlo ezininzi ngenxa yokuba ukusuka Florida kwi Intshonalanga. Kwaye ngokuba abatsha. etc. Siza kusoloko kugwetywa, ya uyazi? Kufuneka uxolele yaye sibonise uthando kwabo kwabangazi. :) God bless ya, uhambo!
Nicole • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:26 mna • impendulo
Ngokumbonisa ukuba ubuhlanga ikhona kubantu abamnyama akuthethi siyawuphuthisa na ukuba abantu abantsundu bakwazi calula kakhulu. Siphila kwihlabathi ewileyo zonke ezo zenzo azilunganga. Ukusebenza ukuvula incoko akuthethi ukuba ukungaxoleli ikhona. (Mholo, umfazi Trip Lee kaThixo ayikho mnyama lol) nokuba, iBhayibheli, uxolo wenza akafuni akalingani. Kukho iminxeba abaninzi kwiLizwi likaThixo ukuba isebenze malunga sikweni nengcinezelo ngandlela zonke. Sifanele sibe esebenzayo nxamnye ubulungisa kwezentlalo, Zonke iifom kunye njongo wokubonisa umahluko omhle kaYesu Kristu kule belimiweyo.
gdoggydog05 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:26 mna • impendulo
Wowu. ubulumko. enecala me, kakhulu.
bergyman • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:27 mna • impendulo
Siza ucela abantu ukuba angaphezu. bonke Sisebenzisa ulwazi (abanye ngokusekelwe iimeko zethu, iqela ethile wesithathu ethembekileyo, kwaye iqela ethile wesithathu ayini) ukuba usixelele ukuba benze ntoni kwiindawo ezithile wedolophu, kunye nabantu kwabakhangela ngendlela ethile. Sonke profile. Le ntombazana blonde Lizzi abantu ngezantsi kusenokwenzeka ukuba ukujonga abe abaziziyatha okanye isekelwe indlela kubonakala kulula. Fair? Mhlawumbi akunjalo. Yena uye ukhetho, yena noba zama ukweyisela zonke ezinye blondes phandle phaya ukuba smart, kuba smart ku nga phambili ukuba nemvukelo OKANYE unako zama nje kwaye wenze konke okusemandleni akhe ukuba lungenakunxityelelaniswa kunye “uhlobo”. uqikelelo My (kwaye kungaba kude) kukuba umnini ivenkile ngokuqhelekileyo ukuba shoplifted ngabantu ngabona / wenza ngathi uDina Robinson … enobulungisa? Hayi akunjalo. Kodwa ngaba umnini venkile owenza ngokungenkathalo? Makhe bathi ngale ndlela… ukuba umntu #1 kubukeka / Tokwe / izenzo ezifana abantu abaye benza izenzo zolwaphulo-mthetho kwindawo babo okanye elumelwaneni lwabo. (Ndenza phezulu hypotheticals apha) Izibalo Injongo bathi: 7 ngaphandle kwe 10 amaxesha xa oku kusenzeka, a lwaphulo-mthetho lwenziwa. Mhlawumbi uthi, ukuba kunjalo kufuneka profile. kodwa oko ndawana manani nina nithi, Ndiza lisaqhuba ukucinga ezona lalo mntu. 9 ngaphandle kwe 10? kuthini nge 99/100? Kuthini nge 999/1000? Kuthekani ukuba une intsapho Arab ebumelwaneni bakho kwaye Niyambona ukothula amaninzi iingxowa isichumiso ibe igaraji yakhe? Mhlawumbi nje uyakuthanda utyani wakhe ukuba ngokwenene eluhlaza. Ngaba Sifanele sisoloko ukurhwaphilizela kubo abantu abangcono?
umbono wam kule kukuba siye kwilizwe elahluleleneyo ngokobuhlanga yaye yahlulwa kwezopolitiko lahlulelene ngokwezoqoqosho. Asingekhe sikwazi ukwenza okuninzi Economics… Imbali usoloko usixelela ukuba sibe kwezityebi namahlwempu. Kodwa kwezombangazwe yobuhlanga singathi “Hayi”. Mna andinangxaki ukuba nepokotho abantu nisishiye kunye eMelika ngenxa izinto okanye kuba bavela lizwe yaye ukwabelana namasiko elo lizwe. Kodwa ndicinga ukuba oku kwenzeka ntoni xa unesiqhuma labantu abaye zahlangana (mhlawumbi ngenxa yokuba ngaphandle nezinto ngaphakathi) ngenxa yendlela zikhangeleka ngaphandle, Ndicinga ukuba siza kuqhubeka ukuba iingxaki de “abantu abamnyama” zikhona kuzo zonke iindawo esixekweni, ukuvota omabini amacala yezinto kwezopolitiko, asebenze amashishini onke ezahlukeneyo, musa ukuba / ukufumana imithetho ezikhethekileyo nokuboleka / yokuvota, aye kwikholeji amazinga efanayo, kwaye batshate abantu ngalo elisekelwe kwibala lomntu. Amajelo ufuna ingumbandela ontununtunu. Amaqela ufuna ingumbandela ontununtunu (ukuba Anokukhokelela abengaphezulu enamandla ukuvota). Lo mngeni ukwenza sizivumela ukuba badlale nathi… oko akuyonto US kuthelekiswa NAZO ingxabano. Oku yi “Kufuneka sonke umdlalo thina kunye”. Oku yi “Kufuneka samkele ukuba kukho Idiots phandle ukuba baza kucinga ngayo abo bacinga thina, kodwa ndiza ngoyaba kuzo kuba ndiyazi ukuba ndingubani.”
Saba kids foster abamnyama (7 kwaye 9 yrs endala). the 7 yr intombi endala esityela “Wonke umntu uyazi ukuba abantu abamhlophe babathiye abantu abamnyama abantu abamnyama babathiye abantu abamhlophe.” Loo nto yandenza buhlungu. Umntu wafundisa ukuba naye ngamazwi. at 7 yrs endala, ukuba babe yinxalenye ye makeup wakhe. Kufuneka ukuba ayeke ukumlandela eendaba / ubuciko wepolitiki kwaye uzame nokwakha iibrorho ungatsibeli kwizigqibo malunga abantu xa abantu benze izigqibo ngathi, kufuneka ukuba sawa simfulathele ukubamba amagqubu kuba kwandisa ukwahlulwa ngokobuhlanga kuphela yaye kufuneka sibe le uqhekeko kulungiswa.
Rumplestiltskin • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:28 mna • impendulo
Kwecala kakhulu kakhulu-icala, hayi w / o isizathu. ngezenzo zethu ngoku, nge “noba yintoni” kusoloko konakaliswe kunye yethu nochuku. I abazali, ukuba apparenty baba “ukungaboni mbala”, yaye ndizele oku mna Ndinombulelo. Xa ndandineminyaka emithathu, nokudlala bam nabahlobo ekuhlaleni ngenye imini kwi yesanti, le into endayibonayo – nganye nganye, umzali akhwele, uthi into efana “ukuza ku Johnny, siyifumene ukuya” okanye, “Suzie, ixesha ukuba uvukile”. Nganye nganye, bonke abaseleyo, ngaphandle omnye. Andizange ndicinge nto loo mini, kodwa iminyaka engamashumi amathathu okanye amane kamva, Ndaqonda ukuba kwenzeka ntoni: ukuba nkwenkwana sokugqibela emnyama. Ndiyakuxelela, xa ndaqonda kanye YINTONI kwangayo loo mini, I woma, kunye nomsindo – loo mfana ukuba ezinye abantwana ukuba “ekhuselweyo” ukusuka wayengumhlobo wam. Ndandingazi ukuba yintoni “mnyama” kwaba. Kanti amazing.
ngoku, ndingu 71, kwaye baba ulwalamano-on-nye noYesu Kristu, for 37 kwiminyaka. UKUBA, ngaphezu ingxoxo “uhlanga” kuye ngokwenene wavula amehlo am, makhe ndikuchazele – kwincwadi Efese, ithi uThixo, yenziwe ngamaYuda, kwaye kukwiintlanga nazo, ONE MAN ENTSHA. abantu, kuthetha ukuba lo, nam, logama nje loo ubudlelwane kunye noKristu. Xa INYATHELO UKUBA UKRISTU, thina “Faka i”, okanye “Ngena kwi” I One Man ENTSHA. Ngoko ke. NGAPHANDLE kaKristu, siya kwambatha isenzo, sizama ukwenza okulungileyo, ukwenza into elungileyo, etc. Kodwa amandla endalo kusoloko laphela, kwaye siza kuba asizifezekisanga kwakhona, kunini nathi “ngaphandle kaKristu”, okanye phantsi kwempembelelo yakhe. Yenza ingqondo?
Ngaphandle kaKristu, akukho UKWAKHIWA NGOKUPHELELEYO – kungenjalo singe wayenazo, kudala. Ngoko ke, angene kuKristu, apho Andisekho abamhlophe, Ndine umzalwana wakho, kwaye Ndinento umva wakho.
Mollie • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:28 mna • impendulo
Ndiyavuma ukuba ubuhlanga ngumba. Kodwa wathi ukuba kuphela ngokuchasene abamnyama undonakele. Mna kulawi izihlandlo ezininzi ebomini bam. Mna a girl.I abatsha emhlophe abe neenwele olugobileyo blonde namehlo aluhlaza kunye aksenti esemazantsi. Mna cuffed yi namarhataa ngenxa yokuba babefuna ukuba umrhanelwa. Ndiye ndaba umpu basigcina intloko yam ngumntu uzimisele ukundibulala nam. Ndiya ngokupheleleyo ngaphandle. Ndifumene abahlobo abamnyama Musani ukuthetha kum, kuba mna amhlophe kwaye “ngeke kwenzeke ukuqonda”. Sonke imizabalazo ezifanayo. Sonke ayamkele into yokuba bambalwa kakhulu abantu baza ukuzama ukufumana usazi phambi kokuba wokusilawula. nomyeni wam Ndinabantwana abahlanu neyethu yaye kutshanje kwamkelwa ababini nabazala bakhe kwenzeka ukuba abamnyama. Ndiyakwazi ndithi ngokunyanisekileyo ukuba kangangoko siye ukuya evenkileni njengentsapho nanini esondela akukho bantu abamnyama ziye ububele kuthi okanye ngokwenene nasaziyo de esiye sayamkela la makhwenkwe mabini. Njengoko ukuba inqanaba nombala abafana eluswini yabo yenza abahlukeneyo nathi. Thina sonke ngokulinganayo thina? kutheni na le nto nangoku omhlophe vs into emnyama? Kutheni nje uluntu bonke abantu behlangana kunye kwaye evuma ukuba kunjalo ukuba ongundoqo ingxaki intliziyo hayi ingxaki uhlanga? Xa amantombazana zam zikhule yaye aqale ukujonga amadoda abo andiyi Andikhathali ukuba umntu omnyama okanye ezimhlophe okanye Chinese. Ndiya kucela kuphela izinto ezimbini, ngokuba ekuthanda uYehova yonke intliziyo yakhe, kwaye ke uYesu entliziyweni yakhe. Ukuba impendulo kwezi zinto zimbini yes ngoko ndiya kwazi ukuba uya kuba kuhle ukuba amantombazana zam. Baya efanayo baya oonyana bam xa ufune umfazi. Ukuze wenze yonke umba uhlanga kuyingozi enoba wenza ntoni icala kuyo. Masivuke nje ngasentla bakubize yintoni na….isifo senhliziyo.
LolaMitche2011 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:28 mna • impendulo
Ukuba intsapho multi-ngokobuhlanga I ukuqonda ngokupheleleyo iimbono ezininzi ezahlukeneyo. Ndiza kuthi ukuba “mhlophe” IMelika bamane ukuqonda nje “olunombala” nombono. Kungalindeleka kanjani? Abantu baya kubonisa uvelwano kakhulu kubantu ukuba liyayiqonda. Abamnyama amagama 100 iimeko ezahlukeneyo ubuhlanga ebomini babo, ngelixa abamhlophe kwakhona igama 100 neemeko ezahlukeneyo kunye izizathu kutheni ndiyikholelwe into abakholelwa. Kunye abamhlophe ngaphezulu ngamanani entolongweni kunokuba nayiphi na uhlanga, kwabamhlophe ngaphezulu ipesenti isilumko entolongweni ke abamhlophe, nto mthetho ezicacileyo ingenziwa nangubani. Sonke sibone kanye oko sifuna ukubona. Ngako oko kuthiwa, Ndingathi kufuneka sonke ukuba sizama nje ukwenza okuhle uluntu lwethu kwaye ndibanyothule. Amerika Black ngoku kufuneka bazi ukuba abakwazi ukuba bezihamba evela abamhlophe, nabamhlophe kufuneka bazi ukuba ukuba abasoze ukuqonda amava abantu umbala hamba nge. Kwaye ngokunyanisekileyo ukuba ilungile.
Dave • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:29 mna • impendulo
lola, Ndicinga ukuba asebenzise “abamnyama” & “abamhlophe” njengoko na kwesi sithuba ngokubhekiselele ezinjalo ubanzi zabaxwa kakhulu. abekho abantu abamnyama utshaba Caucasians. azikho Caucasians utshaba abantu abamnyama. Abantu ngesono ezintliziyweni zabo ngobuxoki kugweba omnye komnye. Edlala ngokwalo phandle phakathi zonke iintlobo ezahlukeneyo beentlanga ngenxa yekratshi abantu abakhetha ukuba inyama ikratshi ngaphandle zabo ibala lolusu. I phakathi kwamazwe angabamelwane Asia ubona apha e-Thailand ngokunjalo. Kuba inene ayiphelelanga abantu abamnyama & Caucasians. Nceda musa ukuvumela iindlela sele buhlungu ukongeza yokunqongophala uxolelaniso kulo mbandela. Tshintsha inokwenzeka ngokwenene.
UKristu wafa ukuze asindise aboni. Kwaye kulapho iqala khona utshintsho xa kuziwa ezi zinto ngaye. Abantu ekwenzeni ngokwenu zabo omdala wabethelelwa emnqamlezweni & lens entsha yanikwa ukubona ihlabathi. Kuya kwenzeka ukusuka komnye umntu ukuya komnye, njengoko befumana imibono yabo, inqubo emxinwa lathwaxwa ngendlela uBukumkani bukaKristu.
Kristu ikusikelele, lola.
KSStrong • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:29 mna • impendulo
@ Gdoggydog05 wabhala "bonke christian yam omnyama
abazalwana zigxila martin, kwaye musa nokuba bavume ukuba kuphosakele kwi ndawo yokuqala ukukhetha le trajedy ebaluleke ngakumbi lawo makhulu trajedys efanayo ezenzeka mihla le. "- Wena ke kambe ukuba amaKristu AA
le ntlekele ngaphezu kwabo bonke abanye. Inyaniso kukuba lo mzekelo sele iindaba, kwaye ke ngoko, iya kuba ngokwemvelo isihloko incoko ngaphezu kwezinye izinto ukuba abantu abayazi. Umpostile uPawulos wakhetha, ngexesha elinye, ukuqaqambisa isono uHerode (ngokutshata umfazi womntakayise) phezu zonke ezinye isono ukuba ezenzeka ngelo xesha. Wabiza ngqo uHerode ngaphandle.
Nangona siyazi ukuba uPawulos akazange athandabuze ukuba abize abantu phezu isono sabo okanye uhanahaniso, sifunda kuphela izihlandlo ezimbalwa yena ebiza amagama athile. Ingaba sono? Hayi, ngokuba uHerode ngenxa yesimo sakhe nesikhundla. Wabiza uPetros imkhupha (ngokuthi
igama) ngenxa yobunkokheli yakhe ebandleni lokuqala. Asinto isono ukwalatha kulo mzekelo uze uxoxe ubuhlanga. Eli tyala liye laba iwonga ilawule kumajelo eendaba, kwaye ke ngoko abantu ukuthetha ngayo.
gdoggydog05 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:30 mna • impendulo
im sally uxolo… ndibone ukuba kufanele ukuba kucace gca. i Andenzi uphethe…. i ndithetha phezu onke amaKristu abamnyama ukuba i Akwazi na okanye ukufunda, etc….. kwaye i akazange akuthethi ukuba phambili kakhulu…. yintoni i ukuthini na le: kuzo zonke izimvo amaKristu abamnyama benze, i abangabubonanga na ukuba ugxeka amajelo eendaba ukuba ngokubeka ityala ethile phezu pedastool ngenxa yohlanga…. uxolo ngalo nto. Andazi ukuba enze okanye. Ndicinga eendaba unetyala yale kwaye bamangaliswa kukuba abazalwana bam abantsundu kunye noodade sathetha kwezinye iindawo zeli tyala kwaye ebonakala yaxhasa kumajelo ukubonisa lwabo, kunokuba kombono, nokuba kuphela ngamazwi abo.
Steve Burlew • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:30 mna • impendulo
Enkosi, uhambo. kakhulu. Waba ixesha elide ekubeni sibe ngawo kunye okanye kuboniswane. Ndiyathemba wena eyakho wenza kakuhle.
Makube lubabalo kuni, noxolo, ubhuti.
Heather Mahnke Worrell • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:31 mna • impendulo
Ndim i 32 nonyaka female ubudala emhlophe. I esivulela nje ibali Trayvon ukuba wam 12 intombi nonyaka ubudala. Ndamchazela indlela endivakalelwa ngayo yonke. Ndafunda blog yakho ngaphezu. I bakuhloniphe, kwaye ndiziva ukuba lo mba kufuneka ukuba kuxoxwe. Ndijonga kuyo ngathi umtshato wam, ngendlela… Ukuba mna nomyeni wam kufuneka ungquzulwano, thina sisebenze ngaphandle side sibe nokuqonda. Thina izidumbu ezimbini ezahlukeneyo, kodwa ngomtshato thina sibanye (nomyeni wam), kanye njengokuba sonke zibekwa kwi zigaba, nokuba siyathanda okanye. I bafundisa abantwana bam ukuba umbala Akukhathaliseki, ubuntu kuyinto nto ibalulekileyo, kodwa kunjalo mna amhlophe, wena abamnyama kwaye asikwazi utshintsha lonto. Oku kuyinyaniso ngathi, nje ngoku ndiya enxibe ihempe ebomvu kwaye ukuba mhlawumbi bonke abantu ayenxiba iihempe ebomvu everyday, sasikwazi ukufumana kudlula konke oku, baphathwe ngokulinganayo nitshabalalisane, nabo bonke ngokuthi “abantu shirt ebomvu”, kodwa loo nto ngeke kwenzeke. Sonke kufuneka bafikelele ukuqonda ezintsha esizifumanisayo ngathi emtshatweni wam. Iingxabano kufuneka ukuba zibekwe, “Musa ukuya kulala ngumsindo”. izizwe zethu zibe kungquzulwano ixesha elide kakhulu. We zange ndayiva ncam ukuba ukuqonda, okanye bafunde ukuba bahloniphane ngokupheleleyo… ngoku Iibhotile zethu iimvakalelo useke imida zabo uxinzelelo kwaye elanda ne irrationality. izizwe yethu zange ngokwenene atshate omnye, kangaka ukuba akhulume. Lifikile ixesha lokuba ukutshata… Wena zichazwe kwi blog yakho kutheni sele ngokweemvakalelo imali kwi Trayvon Martin Case. Ukuba ibali ngawe, uyihlo, likayihlo, ukuba kulawi ngokobuhlanga. Makhe ndinixelele into, njengokuba umfazi omhlophe, I ngayo yonke ndingumphambukeli ngononophelo kungakhathaliseki ibala lolusu. I lock Iingcango zam, clench ebhegini yam, kunye nabantwana yaqiniswa enoba ngubani babedlula I esitalatweni. Kukho umdlwenguli eziyingozi amhlophe, ababulali serial, eba, etc. ulwaphulo-mthetho ezenzeka yonke kanye njengoko kukho nayiphi na ibala kukho… Ndifuna ukunceda iintliziyo utshintsho kunye neengqondo. Nje ngokuba umntu profiled, akuwenzi ube ngokobuhlanga. Kungenxa yokuba kukho izilwanyana ezimbi abagulayo kuzo zonke umbala yaye kufuneka balumke. Ngoko ke, ukuba sasihlala kwihlabathi ekhuselekileyo happy apho wonke umntu wayenobubele nothando, andithandi ukuba sikhathazeke I ndiyaqikelela, kodwa oku ezulwini. UThixo akysikelele, T.L. Uthando Uxolo malube nani.
Christopher Zavala • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:31 mna • impendulo
Ndicinga lonke Zimmerman / Martin into undibonisile, ukuba kuyinto lula kum ukuba ndigwebe kwaye sele lucinga ukuba abantu abathile nje “idlala ikhadi ngokobuhlanga.”
Koko bendihlonele Uhambo. Kwaye ndifuna ukuthatha amazwi akhe entliziyweni uze uzame ukuvelana lweembono kunye namava abanye. Ndiyathandaza ukuba uThixo uza ukwandisa imbono yam ububele bam. Kwaye ndiyathandaza ukuba amandla Vangeli uya kumanyanisa iCawa ukunceda thina sonke ukuba sifumane ubuni zethu kuKristu, kungabi umbala okanye udidi okanye ilizwe…
TJ • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:32 mna • impendulo
Zibone nokuzazisa ukuba yayisekelwe umbala. Ngaba ulibale akuzanga kubekho ento abamnyama ukuqhekeza amakhaya apho ahlala zimm? Oku akunanto yakwenza umbala nje ngenxa kuyo.
laura merrone • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:32 mna • impendulo
Ewe, lets move on kwaye ufumane yonke le ngasemva kwethu. Enoba kwenzeka ngaloo mini, nga uxolele yaye balibale? Yini thina sonke “ukuthanda utshaba lwethu” njengomKristu nokuba ungubani na? Ngaba kugcwale umlomo “impindezelo lo ngoweNkosi” ukuba okwethu? Mna ndingumfazi omhlophe nesuka ngokusebenzisa amava ezimbi mna kodwa Siyifumene phezu kwawo uxolela onke amaqela abandakanyekayo. Isizwe sethu neemfuno ephilisa iinyembezi hayi ngaphezulu. Okukhona nathi sibaxolela, ngcono off siya kuba ngemvakalelo ubuhlanga baya kuphelelwa. ngoku, ukuba kuphela Al Sharpton kunye namajelo eendaba baya kuyeka abakhulisa yonke lento kukwavulwa amanxeba, siya kuba konke kulungile…
Sophia • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:32 mna • impendulo
Wowu! Oku kunjalo kuhlaziya ukuva imbono soBukumkani kulo mba. Sifumana ngoko isongwe ngokuxambulisana nabanye, ukuba silibale ukubuza uThixo oko ucinga. Silibale ukuba iimpendulo sele elizwini lakhe. Silibale ukuba kufuneka sithembele akukho namnye kunye nto ke yena. Ekugcineni, silibale ukuba abo bamlangazelelayo, iya kuba abalifumanayo inyaniso.
Ubuhlanga ngokwenene umba kweli lizwe. Yinto into asinako ukubaleka, kodwa ukuba kufuneka nazo notshintsho. Kufuneka wazi ukuba asikwazi ukutshintsha ngaphandle uYesu Kristu. Ubuhlanga yinto yokwenene leyo ebonakalayo kwinkqubo yobulungisa yethu, kwindlela esicinga ngayo enye kwenye, yaye esiphatha ngayo abanye. De kube intiyo liyasuswa ezintliziyweni zethu, ubuhlanga kuya kuqhubeka ukuze alawule izigqibo zethu. Ixesha elidlulileyo iya kuba elidlulileyo, xa kungekho ayisekho ekhona elizayo lethu. Kude kubengoko, ngokuqinisekileyo ukuba udlulele.
Karla Ngomngcunube • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:32 mna • impendulo
Uxolo, Ndathi ndakutsho ukuba kakubi! Siye ulahlekelwe touch, kodwa ngenxa yobuhlanga!
Karla Ngomngcunube • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 11:33 mna • impendulo
Amen uhambo. Mna bethuna Colombian, inxenye IsiNgesi, kulula kakhulu kum njengoko mna emhlophe, I saba umhlobo okwethutyana obeyindoda natzi iniyo evela Ireland. Akazange wayengazi ukuba wawusele Colombian ixesha elide. Xa ndafumanisa iinkolelo zakhe, Ndamxelela ukuba wawusele Colombian, wenqaba ukukholelwa kum. Ukuba ngase ntsundu, ngewayengazange abe umhlobo wam kwindawo yokuqala. Wahlala abahlobo kunye nam. Ndiyathemba ukuba uThixo wasebenzisa eli ukutshintsha ngombono wakhe, siye ukususela ezilahlekileyo kwebala ngenxa imihla yobomi bemihla, kodwa ngenxa yebala lesikhumba. Andikwazi ukucinga ukuba buhlungu kwaye ukuzilimaza ngayo rhoqo kugwetywa umbala yesikhumba sakho. Nyana wam, Walusela 116. Nguye kuphela emine kwaye azazi ubuhlanga kodwa. Siyabulela ngokusuka emazantsi entliziyo yam ngokuba abayimizekelo omkhulu oonyana bam bobabini. Njengokuba kude njengoko wam oneminyaka emine ubudala uyakhathala, guys bafana rap ukuthanda uYesu bakhuselekile :)
Kay • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:02 pm • impendulo
Okukhona ndizifunda kuva ityala Trayvon Martin. Kokona ndiqonda ukuba abaninzi abakwazi yijonge ukusuka / kwindawo ngokwenene ezineengongoma ngayo. ngokufuthi sijonga la matyala nge lens ngokumileyo ethwele impahla esuka kwangaphambili. Ndithetha nje umfazi-umkhulu waye ngokungemthetho eMexico, ukanti sele umngeni nguKristu ukuba amkele Inyaniso, inyaniso njengoko “mna” Yibone. Kristu uyabuza ukuba sibekela bucala bethu kuquka yohlanga yethu, sex, lwehlelo aliphi, etc (Galati 3:28), ukuze ubone ihlabathi lethu ngemehlo kaKristu…leyo Kufaka yonke inyaniso.
Trayvon Martin, njengoko umhlobo wakhe uRakeli Jeantel agciniweyo yobuhlanga George Zimmerman embiza “Yovalo a cracke **,.” waza wathi kabuhlungu kakhulu ukuhlaselwa gz. Qonda, Mna akukho ndlela elikhuselayo Zimmerman kuba wathabatha umthetho ezandleni zakhe, leyo eyaphela ngo ukufa Martin. Ingxaki yam nale meko, iye yaba pass elidla kunikwa aligcuntswana kwezimvo yobuhlanga kunye nokuziphatha. Inyaniso kule meko kukuba bobabini madoda ngaphandle komgca ekuziphatheni lwabo omnye komnye, ukanti TM ufumana lokuphumelela kuba yindoda umbala. Ndicela uxolo kodwa uThixo sidima sengqondo, kuba lelo ephothiweyo, ndakugwenxa.
ZOMBINI madoda engalunganga ngokufanayo nendlela asabela enye kwenye, ukanti ababakhathalele malunga ZONKE izibakala. Thina nje ukunyamekela malunga izibakala kakuhle indlela esifuna ukucinga.
Ndikufumanisa ubuhlanga yingxaki ngokwenene kwinkcubeko yethu, kodwa inyaniso ayikho nje yingxaki emhlophe, kuba kanye njengokuba kuloo abantu umbala ngokunjalo. ubuhlanga, elingenasiphelo logama nje ngazo kuphela malunga zethu “siqu” abantu. Ndiyakholelwa ngokwenene lo myalezo Martin Luther King Jr.. washumayela, ngaphambi kokuba kuluhlu lwabantu abaziwa ngokungahlawuli yi uLizo Al Sharpton & jesse Jackson. Ubunye kanye ubunye inokwenzeka kuphela xa amadoda nabafazi babone ngokwenene ngemehlo kaKristu, ngokuba njengoko eyabaseGalati 3:28 uveza SONKE OMNYE “IN” uKrestu. Mna ngokobuqu kholwa nanini siye sakhetha ukujonga thina ngaphandle kweso sikhokelo, kunathi bazi okanye bengazi kumisa imiqobo kunye Izahluli. line Bottom amaKristu, ubuhlanga vimba nawe, logama nje uthe wabuwola ngokwenene umbono kaKristu. kungenjalo, usele ulunge ngokoqobo lobuxoki iyaqhubeka ukwakha imiqobo phakathi kwakho nabanye.
Kufuneka ukuba sizibuze ntoni ufuna Inyaniso, okanye sifuna kuphela xa ebona ngenxa isekelwe yethu inokutyhefeka, apho ayikho inyaniso, kwaye kwamkelwa kuphela xa ungena sikhokelo yethu?
Larone • EyeThupha 20, 2013 ngexesha 4:35 mna • impendulo
Yintoni buhlungu ngaphezu nantoni na ukufunda indlela “ezithile” le izimvo wokuposa kule website emangalisayo, I bakufumanisa kunzima ukubona umahluko phakathi apha, YouTube okanye nasiphi na isiza apho abantu bayathanda nje ukuphikisa amanqaku zabo nokugxotha ubabalo noxolo. kunjalo, izimvo ngcono kakhulu kunesiqhelo. Yintoni Uhambo wayezama ukuba adlulisele kubonakala ukuba ekuzukisekeni ezilahlekileyo kuninzi izimvo.
Njengokuba kude njengokuba ukubulawa Trayvon, qaphela indlela yayo phantse zange ngumntu umbala, ngakumbi abamnyama, ofika ukhuseleko Zimmerman. ngoku, yonke into akanyanzelekanga yakwenza nobuhlanga, kodwa izinto ukwenza ukuba kube lula kakhulu kuhoywa. La mava ezimnyama Merika ukuze downplayed. Ngoba? Ukuba Blacks nje ngenxa yokuba ookhokho babo impahla ngamadoda nabafazi kweli lizwe? Ukuba into yokuba ubuxoki urhulumente ngokoqobo wabiza ucalucalulo kubo kulityalwa? Ukuba bayalibala ukuba siseko ngokoqobo lowu ukuba kuphela 3/5 yendoda? Okubaluleke ngokulinganayo, Kufuneka abantu abangengabo abantu umbala ngokwenene wenze engazi ukuba ezi zibakala efanayo zembali American ngathi akukho kusekho iinkqubo zengcinezelo (nje iprofayili) ukuba umphumela ngqo uluntu abamnyama kunye namanye amaqela amancinane? Kulula kakhulu ukuba ukuxelela abantu ukuba phezu kwayo okanye aveze Black impumelelo kwiinzame ukujongela ubudlelwane bobuhlanga kweli lizwe BABEVINJWE ngokobuhlanga. Kodwa xa wena unguye Usomashishini othile obuhlanga (nakuba engazi) yaye nina aningabo kuchaphazela kuyo kakubi, wena ekugqibeleni sibe nombono ezahlukeneyo kwaye maxa wambi nkqu ukuzithethelela xa kuziwa nobuhlanga. Mayibongwe iNkosi uKristu nobunye BONKE abantu. Yima nzu, iicawa ahlale iindawo ezininzi eyahlukanisiweyo eMelika. Enkosi nonke lokufunda lonke kusikelelwa.
thefollower • EyeThupha 20, 2013 ngexesha 9:51 mna • impendulo
Ndiye ndafunda ngale nto yonke izimvo, iimpikiswano, iingxelo uvelwano. Konke solo kum ingqondo yakho kunye namava lobuqu ngazo zonke ezi zinto. Kanye kule Trip ekuqaleni wathi musani ukuyeka ukuthetha ngayo, kunjalo, Ndiqinisekile kakhulu wayengathethi phikisana.
I am 18 nonyaka intombazanyana emhlophe, umhlobo wam osenyongweni i 18 nonyaka intombazanyana abamnyama, i Akukho izalamane abamnyama, ibandla yam emhlophe, i ube nabahlobo abaninzi abamnyama, kwaye i wayesebenza kwinkampu abantwana abahlelelekileyo apho ngaphezu kwesiqingatha beshiya ezimnyama….i ndiyibonile indlela nonke ubeke izibakala ezithile malunga ebomini bakho ukuze abantu baqonde ukuba ngcono ke ezo ezimbalwa ngobomi bam izibakala…Ndiye ndafunda malunga nomba ngokobuhlanga kwaye ndisothuka kwayo wandenza mad ngokwaneleyo ukuze ndaphule isandla sam ukuba Ukubetha izinto xa weva kwemizabalazo abanye abantu abaye batyhubela. kulungile yayo ukuze ngemifanekiso yabo izinto ezifana ukubulala, ubuhlanga, amanga, ukuzenzisa, kodwa ke ngokuqinisekileyo Akulungile ukuba baphathane kunye indelelo kunye 'i bazi ngcono’ zengqondo i sibonile kwi apha. Ukuze bangazi yonke lukhulu malunga ihlabathi neento zonke imizabalazo yayo kodwa i ukwazi izinto ezimbalwa. Ndiyazi ukuba yokuqala zonke uThixo wadala zonke umntu ngokulinganayo njengabahlobo abo liphathwa ubuhlanga sinako kwaye kufuneka inamathele phezulu kubo. Ndiyazi ukuba uThixo uMgwebi olilungisa kunye abaninzi kuni phikisana apha uthe wena christian…inyala kuwe… kulo mzekelo lizise lwahlulo hayi hayi nje phakathi kwabantu abamhlophe / abamnyama / kokufika phakathi wonke umntu uba / yena wazi ngaphezu bonke akavumelani nazo. Singabantwana bakaThixo, kuphela omazi kakuhle ukuba kwenzeke ntoni na Treyvon ebusuku yabulawa, ngoko ke ngubani esimxoxisayo ngubani kulungile okanye akulunganga?
John 8:7 Ngoko Uthe ke bakumana bembuza, waphakama, wathi kubo, “Lowo Ongenasono kuni, makaqale amgibisele ngelitye.”
Andenzi ukuva ukukuxelela uluvo lwam phezu ityala kwaye i Andenzi niwuvayo ukuba kunigweba. I waziva enyanzelekile ukuba bakhumbuze ukuba ekunene okanye engalunganga siye sicelwe ukuba ukuthanda abantu ukuba ungahlali yekratshi ukuzingca ngenxa ngokuphumelela ukuxambulisana asinabo ukuphumelela. John 8:7 weza engqondweni ngaphakathi ukuphawula ezilishumi zokuqala waza wahlala apho de kwasekupheleni. Ukuba phikisana ukukwenza oko ngendlela enothando okanye, nantsi enye into funny, Ukuba uyazi ukuba siphikisane ngendlela nangoku nentlonelo MUSA aphikisane! Oku akuthethi kuthi ukuba ilahlwe okanye umntu okhululekileyo kwaye phandle yayo idiotic ukuba benze ngathi kuba. Enkosi ngokuthatha ukumela kunye nokwabelana ngezimvo zakho! Like Ndathi mna Ndiqinisekile ukuba bonke abantu abakrelekrele kwaye kube mnandi kodwa ukuba akukho ukubonisa uthando lukaThixo nkqu iimbono zethu yoko le nto ihlabathi abantu bacinga UbuKristu uyafaneleka xa asenzi izinto ezahlukeneyo ukusuka abanye umhlaba?
ngayo • EyeThupha 20, 2013 ngexesha 11:31 mna • impendulo
Thina amakholwa, Abathwali womfanekiso lweNkosi yethu uYesu Kristu, abantu baqonde ukuba bonke abantu abangendawo, nesono, akakhululwa ngentlawulelo kuphela ngobabalo ke bukaThixo, obungokukholwa kuYesu Kristu wathabatha ingqumbo loYise, ngenxa yesono sethu, emnqamlezweni ngenxa yethu. Into esinayo yintoni na ngaphandle inyaniso? Le INYANISO kufuneka ibe yintoni ulawula le ngxoxo, umbono. imbali yethu ubalisa ibali kwaye inika iimpendulo xa sikulungele qotho.
Andiyi kude my identity ngokobuhlanga. Ngenxa yokuba awungeni ndawo le ngxoxo. Mna umthandi weNkosi, yaye umntu esafunda umthetho, ubulungisa, yokuhlalisana, kunye nokunyanzeliswa komthetho.
Jonga amanqaku kunye stats. Inkqubo American Ubulungisa kude colorblind. Yena kakubi reeks yezono zengcinezelo, ukukhetha, nobubi. Classism nje kangangoko iwazekise njengoko lobuhlanga. Ke ukuba nithi ubuhlanga ayikho, okanye akazange adlale indima isiphumo sale meko, impazamo. Kuyinto umbono ukhetha ngoyaba ngokupheleleyo imbali inkqubo yethu yobulungisa ekhetha oko bekuya angathanda ukuba yinyaniso.
ubuhlanga zikhona. Liyaphila kwaye kakuhle esebenzayo.
Okuvuyisayo, sikhonza uThixo wazi yonke into. Ngubani na unamandla okuphilisa abo baya makamhlangule. Ngubani na ukuthembeka okuphilisa ubukrakra nengqumbo. Ngubani usinike amandla ngokuthandaza kunye nesenzo.
Babafundi abantwana benu enyanisweni. Inyaniso kukuba uhlanga lwabo luya kuba yinxalenye bangoobani, (kwaye sibone indlela abanye abantu babaqala) kangangoko bahlala.
Uzuko kuThixo ozijonga na oko mntu wenza.
PastorNorm • EyeThupha 24, 2013 ngexesha 10:35 pm • impendulo
Eyona nto Ndiyakholwa ukuba uThixo ufuna ukuba yokwenza esi siganeko kunye nazo zonke ezo abanye sisaqhubeka nokuva ngayo koko Uhambo. Thandazela onke amaqela achaphazelekayo ukuba mhlawumbi ukuze kusindiswa into eyenzekileyo okanye unelungelo ukuba bangamaKristu. Yintoni wonke lingabi kukuba uThixo uSomandla ebizwa inombolo Trayvon kaThixo ngenxa yaso nasiphi na isizathu, Yena. Akekho wayeza ukutshintsha ukuba ngobo busuku. wathi uThixo, “Trayvon, ke ngenxa yenu” nje wenzayo Tupac kunye nabanye abaninzi. UKUBA Trayvon wasinda, uzuko uThixo yena ngoku kunye noYesu. Ukuba akukho njalo, okubuhlungu ukuba uvutha Esihogweni. khumbula, Shu. 12:13 ” Ukuhlanganiswa kwentetho, yakuba ivakele into yonke: ukoyika uThixo, ugcine imithetho yakhe: ngokuba indawo leyo yimfanelo yoluntu lonke.
muchneededmoderator • EyoMsintsi 24, 2013 ngexesha 5:04 pm • impendulo
Ndingene kule website, funda-blog eziziintlobo ngeentlobo ngeposi yaye ndakhuthazwa izithuba ezahlukeneyo de wafika lo. Kumsonto izimvo koko kubulawa ngezantsi kwaba bobabini ephazamisayo and kubuhlungu intliziyo. Endaweni yokufunda ezolile, ogulayo, olumkileyo, uThixo nendawo izimvo, Kwavele ngokwam ngezigalo a frenzy zobuhlanga nentiyo. Kwaye konke oku amaKristu afanele ababonakala ucinga ukuba kufanelekile ukuba axelele omnye umntu okanye hayi amaKristu kunye nokuba imithandazo yabo iya kufikelela ezindlebeni kuThixo okanye Marvin wakubeka: “…imithandazo yenu mhlawumbi akayi kwenza ezidlulileyo uphahla lwakho.” Abaninzi kuni uthi ngokuphindaphindiweyo ukuba wena akunguye kwi kuhlaselwa yaye musa unqwenela ukucaphukisa nabani, ukuba nje obakho ngezimvo zakho kunye yebo, banamandla. Fine, sonke iimbono zethu yaye sivakalelwa kakhulu kwimiba ethile ukuba okanye hayi sifumana abanye bayavuma. Loo nto ilungelo kunye nenkululeko thina baseMelika kunandipha kwaye ndiyathemba alikhe ethathwe kuthi. Kodwa ukunqgubanisa rhoqo omnye umzalwana okanye udade kuKristu, ukuze bashumayele omnye komnye ngokungathi nani ngokwenu niyazi kakuhle eliluhanahaniso olusulungekileyo. Thina njengamaKristu kufuneka wazi ngaphezu kwakhe nabani ukuba nje yabantu thina, senze iimpazamo, senze nekratshi zidla, siya zimfanyekiswe kwimiba ethile nje isono sethu kunye kungakhathaliseki ukuba sizama kangakanani, ezo blinders uya kusoloko kuba bewile, nesono, abantu. Kungenxa yeso sizathu ukuba uThixo umgwebi wethu. Asinto iimbono zethu izinto, kodwa kaThixo yaye uThixo yedwa. Ukuze enze malunga kwamanye ukuze ngentiyo yaye zinokubiza ngokwenu “abazalwana” ayinyamezeleki okungcono.
Marvin, ukuba ukunyaniseka kwanyanzeleka ukuba ndiyeke ukufunda malunga nesiqingatha ngendlela phantsi izithuba nje kuba nako isisu indlela waqhubeka uphathe “abazalwana noodade” lonke elo xesha enamathele imipu yakho, iya asha ngakumbi uze esithi ukuba bacaphuka. Funda izaziso zakho, mhlekazi. Ukuba ingaba ndivumelana nawe okanye hayi Akukhathaliseki, into ebalulekile ophatha ngayo umzalwana wakho. Funda i zithuba, nawe kude (I ubuncinane de wayeka ukufunda uye wehla) lo mntu aziphethe ngayo kule msonto. Nixelele abanye awanalo ilungelo kukuxelela indlela yokuthandaza uze ke sicebisa ukuba uThixo sive nokuva imithandazo yabo. Ungubani na wena ukucebisa into enjalo? andithi na kaloku unguThixo. Kuhla itrone yakho uze uthethe kubazalwana benu eluthandweni endaweni namonde kunye nomsindo.
Ubuhlanga okungcolileyo ndibona ukuba yonke kwaye rhoqo. Ndimthiyile ngenxa yezizathu ezininzi ezahlukeneyo kumanqanaba ezininzi ezahlukeneyo. Kodwa kuya kubakho ukuphiliswa esi sifo de ZONKE emacaleni ayaqonda ukuba kukho ubuhlanga, kungakhathaliseki ukuba linjani ibala lolusu lwakho KUNYE oko bonke abantu banithiya abanye abantu nje ngenxa yebala labo okanye inkcubeko yabo yahluke yabo. NjengomKristu Ndiba buhlungu gqitha ukubona indlela ubuhlanga kwenziwa abazalwana noodade bam. Ndiba buhlungu ukuba kufuneka ukubona “ngebala” ngeenxa zonke ikona kwaye sele lucinga ukuba abantu ngebala, ngenxa yebala labo umhlophe. Kufuneka ubone amanye amaKristu imibala kunye neenkcubeko ezininzi. Misa ememeza “ngebala” kwi ngasinye yaye nje bathi “ubhuti”. Ndibona ubuhlanga kuvele ingxaki ngosuku ngalunye kuba nje icala elinye okanye ezinye ekhala “ngebala” ngaphandle uyamazi umntu dilesi. Ukuba ubona omnye umzalwana okanye udade esebenza ngendlela elinobuhlanga, emva koko zonke iindlela yilungise uze uthethe loo mntu, ngasese. Kodwa ekhala ingcuka xa kungekho ingcuka.
Sithandane njengokuba naye uKristu walithandayo ibandla. Yiyo esimele siyikhumbule xa kuziwa ekujonganeni omnye komnye.
Khankanya: Hayi Ngokubona, Kungabi Comfort: Encouragements Kwabo okuhlanganisa iinkqubo Churches : I Front bokwakhiwa